Iinkcazo kunye neenkcazo, ukuCinga kunye nokuTshabalalisa-iZiko leSiseko
Iinkcazo zokuCinga kunye nokuPhelela
Imigqaliselo kunye neentetho ezivela kwiConsidering and Destiny
Ingozi, iAn: ngokuqhelekileyo kuthiwa yinto engalindelekanga okanye isiganeko ngaphandle kwesizathu esibonakalayo. Nangona kunjalo, ingozi yinkalo ebonakalayo kuphela kwintsimbi okanye isangqa se-unobserved okanye esingaphambili kubangelwa ukuba kwenzeke ukuba kwenzeke ingozi. Ezinye iigqeba zembuthano ziziingcamango nezenzo ezinxulumene nengozi.
Aia: igama apha linikezelwa kwinqununu eqhubekele phambili ngempumelelo nganye kwiqondo ngalinye njengento yalo kwiYunivesithi yeMithetho, kwi-body ephelele, engenasini kunye nokungafi; oye waphumelela kwindalo, kwaye usekhompileni njengecala okanye umgca olwahlula kwi-side-side.
Utywala: sisifo sengqondo somenzi womnqweno-nesavo, nesiphi isifo umzimba womzimba osuleleko ngokusela kotywala otywala. Utywala luhle kakhulu kwaye lunokwethenjwa, ngelixa ligcinwe njengomkhonzi, okanye lisetyenziswe njengento ephakathi kokwenza amalungiselelo okuxuba. Kodwa utywala, njengomoya, unentloni kwaye unganasiphako xa uba ngumlawuli. Kuphela nje umcimbi wexesha, kule nto okanye ebomini bomi, xa bonke abenzi beza kufuneka babhekane ne-fiend baze bahlulwe. Utywala alunobungozi, ukuba umntu akanakuyiphuza; liphela nje. Kodwa xa umntu eselayo, umoya otywalayo ophakathi udibanisa nomnqweno egazini kunye nokuxhamla kwiimbilini kunye nokunyaniseka umnqweno kunye nokuvakalelwa kwinkolelo yokuba ungumhlobo, kwaye le nkolelo ikhula kwaye ikhule. Ingumoya wokulungelelanisa kunye nobudlelwane obuhle kuzo zonke izigaba zobunxila apho kuholele khona ixhoba. Yaye xa umenzi ekugqibeleni ephoswe kakhulu ukuba athathe ifom yomntu, i-fiend iholele entolongweni yayo kwiindawo zokuhlala zomhlaba, apho ichanekile kwi-inertia. I-inertia enonophelo iyamangalisa kwaye iyantyantya kunemililo enamandla kakhulu nayiphi na inkolo okanye isihogo esinokucinga. Utywala ngumoya wokulondoloza kwendalo; kodwa libulala into ekulondolozayo. Umoya wokunxila uyamesaba ukuKhanya koMntu ebantwini, kwaye uzama ukuphazamisa umntu. Indlela ephela yokuqinisekisa ukuba yinkosi kwaye ayikho ikhoboka lomoya wotywala: Musa ukunambitha. Yiba nesimo sengqondo esomeleleyo nesigxina kwaye ungakhethi phantsi kweyiphi na inkohliso okanye ifom. Ngoko omnye uya kuba yinkosi.
Intukuthelo: umnqweno ovuthayo egazini kunye nokwenzela intukuthelo kwizinto ezifanele okanye ezifanelekanga ukuba zenzeke ngokwabo okanye kwenye.
Kubonakala: iiyunithi zendalo zihlanganiswe zibe zikhulu okanye ifom kwaye zibonakala; kuya kuguquka okanye ukusabalalisa, xa oko kuyiguqula kunye kunye nokuhoxiswa.
Ukutya: umnqweno wokugcoba ukunambitha kunye nenkohlakalo ngezinto eziphathekayo, ekuphenduleni ukunyanzelwa kwamagumbi endalo ukuba kugcinwe umba.
Ubugcisa: ubuchule kwisimo sengqondo nomnqweno.
Body Astral: njengegama elisetyenziswe kule ncwadi kukuchaza umbane oqinileyo womzimba wesine. Ezinye ezithathu zi-airy-eziqinile, eziqinileyo-eziqinileyo, ezinamandla-ezinamandla. I-airy-eqinile kunye neqhekezayo-oqinileyo yimihlali kuphela, ayikho
phuhliswa ibe yifom. Umzimba we-astral ngulo owenza umbandela womzimba okhulayo ngokwefom yefom-breath kuze kube sekuzalweni. Emva koko, umzimba wenyama uxhomekeke kumzimba we-astral ukugcina isakhiwo sakhe ngendlela
ngohlobo lwefomfom. Emva kokuba ifomu lokuphefumula liphuma emzimbeni ekufeni, umzimba we-astral uhlala kufuphi nesakhiwo senyama. Emva koko umzimba we-astral uxhomekeke kwisakhiwo sokugcinwa, kwaye usasazeka njenge
Indawo: Ubunzima bomcimbi oqhekekileyo ophuma kummandla ojikeleze nayiphi na into okanye into.
I-Atmosphere, Physical Body: ubuninzi bomzimba obunemizila ebomvu, e-airy, elamanzi kunye neqinileyo ephuma kuyo kwaye eqhubeka ejikeleza kwimifudlana emine eqhubekayo yeeyunithi kunye nangomzimba ngokuphefumula, inxalenye esebenzayo yohlobo lokuphefumla.
I-Atmosphere yoLuntu, i-Psychic: Uhlangothi olusebenzayo lomenzi, inxalenye yengqondo ye-Triune Self, icala elincinci linye inxalenye yalo ekhoyo kwizintso kunye ne-adrenals kunye neentliziyo zokuzithandela kunye negazi lomzimba womntu. Iphuma, iipounds, idonsa kwaye iqhube ngegazi kunye nemisipha yomzimba ngokuphendula umnqweno kunye nomvakalelo womenzi ophinda ekhona emzimbeni.
I-Atmosphere ye-Human, yengqondo: yileyo nxalenye yengqondo yengqondo ye-Triune Self ephethe umoya wesimo sengqondo kunye nendlela engqondweni yengqondo kunye nomqondo-mkhono onokucinga ngayo kwiindawo ezingathathi hlangothi phakathi kokungena nokuphazamiseka kokuphefumula.
I-Atmosphere, ye-One Triune Self, i-Noetic: kunjalo, oko kukuthi, inkunkuma, apho uMkhanya wokuNgcono uhanjiswa ngumoya kunye nemimoya yengqondo ukuya kumenzi-ngomzimba ngokuphefumula.
Indawo yaseMhlabeni: lenziwe ngamacandelo amane omhlaba okanye iindawo ezinomlilo, ezinomoya, ezinamanzi kunye neziqinileyo eziqhubekayo zijikeleza ngokujikeleza komhlaba kunye nokujikeleza komhlaba, ukusuka nakubungaphakathi ukuya kwiinkwenkwezi ezide kakhulu.
Ukuphefumula: Ubomi begazi, umgcini kunye nomakhi weethambo, umlondolozi nomonakalisi, okanye apho yonke imisebenzi yomzimba iyaqhubeka ikhona okanye iphela, kuze kube yinto yokucinga ukuba yenziwa ukuvuselela nokubuyisela umzimba ubomi obungunaphakade.
Ifom yohlobo: iyunithi yendalo leyo yindlela ephilayo (umphefumlo) ngamnye womzimba womntu. Ukuphefumula kwayo kwakha kwaye kuvuselela kunye nokunika ubomi izicubu ngokubhekiselele kumzekelo onikwe ifom, kwaye ifomu layo ligcina ngendlela yesakhiwo, umzimba wayo, ngexesha lokubonakala kwayo emzimbeni. Ukufa kukubangelwa ukuhlukana kwenyama.
Cell, A: yintlangano eyenziwe ngamacandelo exesha elidlulileyo lomcimbi ovela kumbane okhanyayo, omoya, omanzi, kunye nemimandla eqinile yombandela, ehlelwe kwisakhiwo esiphila ngokubambisana kunye nokulungelelaniswa kwamacandelo amane omakhi:
i-link-link, ifan-link, kunye neeyunithi zee-cell-link compositor ezenza ukuba iseli, engabonakaliyo, kungekhona umzimba weeyunithi ezihamba phambili ezingabonakala okanye zibonwe phantsi kwe-microscope. Iinqununu ezine zomqambi zidibeneyo
kunye kwaye uhlale kwiseli; iiyunithi ezidlulileyo zifana nemilambo ehambayo apho abahlanganisi baqhubeka bebamba kwaye baqulunqe iiyunithi ezithathayo kwaye njengokuba umzimba weso sisele ngexesha lokuqhubela phambili kwintlangano enkulu enoba iseli liyinxenye yecandelo. Iinqununu ezine zomqambi zeseli emzimbeni womntu azibhubhisi; xa bengenakunikwa iiyunithi ezidlulileyo i-cell body iyayeka, iyachithwa kwaye iyalala, kodwa izakhi zeeseli ziya kuphinda zakha umzimba ngexesha elizayo.
Ikhefu: ligama elisetyenziselwa ukuzithethelela ngenxa yokungaqondi, okanye ukuchaza izinto, izinto kunye neziganeko ezenzekayo kwaye ezingachazwanga lula, njenge "imidlalo yemathuba," okanye "izinto ezenzeka ngethuba." Kodwa akukho nto enjengethuba, ngoko kwenzeka ukuba kwenzeka ntoni nangayiphi na enye indlela kunokuba yenze ntoni, ngokuzimeleyo komthetho kunye nomyalelo. Yonke into eyenzeka ngethuba, njengokutshintshwa kwemali, ukujika kwekhadi, ukuphonsa ukufa, kwenzeka ngokutsho kwemithetho ethile kunye nokulandelelana, nokuba ingaba ngokwemithetho ye-physics okanye imithetho ye-knavery kunye neqhinga. Ukuba into ebizwa ngokuba yimpumelelo yayizimeleyo komthetho, bekungekho mithetho ethembekileyo yendalo. Emva koko bekungekho ukuqinisekiswa kwamaxesha, omini nobusuku. Le yimithetho esiyayiqonda kangangoko, njengokuba zikhona "zenzeke" zenzeke, esingazithathiyo ngokwaneleyo ukuqonda.
Umntu: iyinqanaba lokunyaniseka nokunyaniseka kwemvakalelo neminqweno yakhe, njengoko kuboniswe ngcamango yakhe, ilizwi kunye nesenzo. Ukunyaniseka nokunyaniseka ekucingeni nasekusebenzeni kuyisiseko
uphawu olufanelekileyo, amanqaku atyhilayo kunye nolwayilo. Umntu uzalwe, azuze kwifa lomntu wangaphambili, njengento ebalulekileyo yokucinga nokusebenza; iyaqhubeka okanye ishintshwe njengoko umntu ekhethayo.
Ukutya: ukuzicingela ngokubhekiselele kumalungelo kunye nokufumana ukuKhanya, ngokwemigaqo yokucinga.
Umqambi, u-Divine, "U-Immaculate": akukona ukufakwa kwe-ovum kwintombi, kufuneka ilandelwe ngumzimba kunye nokuzalwa komzimba othile. Ukuzalwa ngokwesini akukwazi ukuphumela ekuvelweni kukaThixo. Umzimba "ongacacanga" ngowokuvuselela umzimba ongafezekanga wesifo sokufa kwisimo somzimba ongunasiphelo sokuphila okungunaphakade. Xa ezilishumi elinambini zandulela iintsholongwane zenyanga zidibaniswe kunye neyeshumi nantathu yintsholongwane yentsholongwane, xa ibuyela entloko, idibene ne-germ, kwaye ifumana i-ray yoKhanya kwi-Intelligence. Oko kukuzimela, ukukhulelwa nguThixo. Ukwakhiwa kabusha komzimba opheleleyo kulandela.
Isazela: sisisombululo solwazi malunga noko akufanele kwenziwe ngokumalunga naluphi na umxholo wokuziphatha. Umgangatho womntu wokucinga okufanelekileyo, ukuvakalelwa kakuhle, kunye nesenzo esifanelekileyo; lizwi elingenangqiqo elungileyo entliziyweni evimbela nayiphi na ingcamango okanye isenzo esahlukileyo kwizinto azi ukuba zilungile. "Hayi" okanye "Musa" lizwi lolwazi lomenzi malunga noko kufuneka akuphephe okanye angenzi
okanye anganiki imvume yokuba yenziwe nayiphi na imeko.
Unonophelo: , ngolwazi; kwinqanaba apho into eyaziwayo iyayiqonda malunga nolwazi.
Ubulumko: Ubuninzi kuzo zonke izinto-into eyaziwayo kuyo yonke into eyaziwayo as yintoni okanye of ukuba yintoni okanye yenzayo. Njengelizwi, isichazi "isazi" senziwe sisibizo
Isixelongo "." Lizwi elilodwa ngolwimi; ayinaso isiqhelaniso, kwaye intsingiselo yayo ifikelela ngaphezu kwengqiqo yabantu. Ubumnono buqala, kwaye bupheli; akubonakali, ngaphandle kweempawu, iimpawu, zichaza, iimpawu okanye iimida. Sekunjalo, yonke into, ukususela kumncinci ukuya kumkhulu kunayo yonke, nangaphezulu kwexesha kunye nendawo ixhomeke kuyo, ukuba ibe nokuyenza. Ubukho bayo kuyo yonke into yendalo kunye nangaphaya kwendalo kwenza zonke izinto nezilwanyana zikwazi as yintoni okanye of ukuba yiyiphi into, kwaye kufuneka benze, ukuba uqaphele kwaye uqaphele zonke ezinye izinto kunye nezidalwa, kunye nokuqhubela phambili ekuqhubekeni kwee-degrees eziphezulu zokuqonda ngokubhekiselele kwinqanaba elona liphela-Ukuqonda.
Ukunyaniseka: ukulungelelwa okumsulwa komenzi-ngomzimba ukukholelwa ukuba izinto zifana nokubonakala kwazo, kwaye ukwamkela okwenyaniso okanye okubhaliweyo.
I nkcubeko: luphuhliso oluphezulu lokufunda, ubuchule kunye nomntu wabantu, okanye impucuko ngokubanzi.
Ukufa: ukuhamba komntu owaziyo emzimbeni ukususela ekuhlaleni kwenyama, ukutshitshisa okanye ukuhluthwa kwecandelo elincinci le-silvery edibanisa ifomu lokuphefumula ngomzimba. Ukuqhekeza kubangelwa ukuzimisela okanye ngokuvuma ukuba umzimba wakho ufe. Ngokuqhekeka komtya, ukuvuselelwa akunakwenzeka.
Inkcazo: lulo lwakhiwo lwamagama ahambelanayo achaza intsingiselo yesifundo okanye into kwaye, ngokucinga apho, ulwazi lukhoyo.
Inzala yoMntu: kuye kwachazwa ngokwempawu kwizibhalo zakudala, njengembali yeBhayibhile ka-Adam noEva kwiJardin yase-Eden; ukulingwa kwabo, ukuwa kwabo, isono sabo sokuqala nokuxoshwa e-Eden. Oku
iboniswa njengezigaba ezine ekuhambeni komenzi-ngomzimba ukusuka kwiindawo zokuhlala. Inzala evela kuMmandla wokuPhelela kweli hlabathi lokuzalwa nokufa, lalinguhluko, ukwahlukana, ukuguqulwa nokuguqulwa. Utshintsho lwaqala xa umenzi womnqweno-kunye nomvakalelo ekhulisa inxalenye yomzimba wakhe ophelileyo waza wabona ukuziva kwinqanaba elongezelelweyo. Ulwahlulo lwaluthi umenzi wambona umnqweno walo kumzimba wesilisa kunye nomvakalelo walo kumzimba wesetyhini kunye nokuzicingela ngokwazo njengendawo ezimbini, kunye nokuhamba kwawo ekusisigxina. Ukuguqulwa kwakuhla okanye kwandula ukusuka ngaphakathi kunye nokugqithiselela kwimeko engaphandle kunye nesezantsi kunye nokutshintsha kwisakhiwo somzimba. Ukuqhaqhaqhaqhaza kwakuza kwintsikelelo yangaphandle yomhlaba, ukuphuhliswa kwezitho zesini kunye nesizukulwana sesigqeba socansi.
Isifiso: amandla owazi ngaphakathi; izisa ngeenguqu ngokwayo kwaye ibangela utshintsho kwezinye izinto. Inqweno yecala elisebenzayo lomenzi-ngomzimba, ilanga elincinci lokuziva; kodwa umnqweno awukwazi ukwenza ngaphandle kwesinye isahluko esingenakulinganiswa, ukuziva. Isifiso asibonakali kodwa sibonakala sahlula; kukwahlukana ngokuthi: umnqweno wolwazi kunye nomnqweno wesondo. Kuloo nto, ngokuvakalelwa, imbangela yokuvelisa nokuveliswa kwazo zonke izinto eziyaziwayo okanye ezibonakalayo ngabantu. Njengokuba umnqweno wesini uhlala ungacacile, kodwa ubonakalisa ngamagatsha ayo amane: umnqweno wokutya, umnqweno wokuba nezinto, umnqweno wegama, kunye nomnqweno wamandla, kunye neenqwelo ezingenakubalwa, ezifana nendlala, uthando, ukuzonda , inceba, inkohlakalo, ukuxabana, ukuhaha, ukuthanda, ukufumana izinto, ukufumanisa kunye nokufezekisa. Umnqweno wolwazi awuyi kutshintshwa; luhlala lufana nomnqweno woLwazi lolwazi.
Unqwenela igama, (udumo): liqoqo lezinto ezibonakalayo ezingabonakaliyo zobuntu, ezingenanto kunye ne-evanescent njengebhola.
Isifiso Samandla: yinto yokukhohlisa eyenziwe yintoni inzala kunye nomchasi womnqweno woLwazi-ulwazi-(umnqweno wesini).
Umnqweno woLwazi: Umnqweno onqunyweyo kwaye ungabonakaliyo womenzi ukuba abe nolwalamano oluqinileyo okanye umanyano kunye nomazi weZiqu zakhe zoMntu.
Unqweno woSondo: ukuzingca kubangelwa kukungazi; umnqweno obonakaliswa ngesondo lomzimba apho ukhona, kwaye ufuna ukudibanisa kunye necala layo elixinzekileyo nelingathandekiyo, ngokubambisana nomzimba wesini esahlukileyo.
Ukuphelelwa lithemba: ukuzinikela ngokwesaba; ukuyeka emsebenzini ongekho phantsi ukuvumela ukuba kwenzeke oko kwenzeka.
Ukuphela: yi mfuneko; oko kufuneka ukuba kwenzeke okanye kwenzeke, njengemiphumo yento esacatshangelwe kwaye yenziwe okanye yenziwe.
Ukutshatyalaliswa, Ubunzima: iquka yonke into ephathelene nokuzalwa kunye nomgaqo-siseko womzimba womzimba; iingqondo, isondo, ifom kunye nempawu; impilo, isikhundla ebomini, intsapho, kunye nolwalamano lwabantu; ixesha lobomi kunye
ngendlela yokufa. Umzimba kunye nawo onke malunga nomzimba uhlahlo lwabiwo-mali kunye ne-debit evelele ebomini bomntu obunjengoko kubangelwa yinto ecinga ngayo nokwenzayo kuloo milo, kwaye ngubani na onokujamelana naloo nto. Omnye akanako ukuphunyuka oko umzimba uphi na. Omnye kufuneka amkele oko kwaye aqhubeke enza ngendlela edlulileyo, okanye omnye unokutshintsha oko kudlulileyo kwizinto umntu azicingayo kwaye uya kuthanda ukuba, ukuzenza kunye nokuba nazo.
Ukutshatyalaliswa, i-Psychic: Yonke into enxulumene nomvakalelo-kunye nomnqweno njengomntu owaziyo emzimbeni; sisiphumo saloo mntu udlulileyo uye wasicinga kwaye wenza, kwaye kwinto ezayo iza kubakho
yintoni na ngoku iyakuthandayo kwaye icinga kwaye yenza kwaye iya kuthintela njani umvakalelo-kunye nomnqweno.
Ukutshatyalaliswa, Ingqondo: lizimisele ukuba yiyiphi, yintoni, nokuba yintoni umnqweno nomvakalelo womenzi-ngaphakathi komzimba acinga. Ingqondo emithathu-ingqondo yomzimba, ingqondo-nomnqweno-ingqondo-ifakwe kwinkonzo yomenzi, ngumbono weZiqu zakhe zoMntu. Ukucinga oko umenzi akwenzayo ngalezi zintathu iingqondo yinjongo yakhe yengqondo. Isiphumo salo sengqondo sisimo sengqondo sayo kwaye siquka uhlamvu lwengqondo, iingqondo zengqondo, ukufumana iingqondo kunye nezinye izibonelelo zengqondo.
Ukuqothulwa, i-Noetic: yimalini okanye isantya soLwazi lolwazi loko umntu analo ngokwaloo mvakalelo kunye nomnqweno, okhoyo, kuloo nxalenye yomoya wesimo somoya esesimo sengqondo somoya. Esi sisiphumo salo
ukucinga kunye nokusetyenziswa kwamandla okudala kunye nokuvelisa; ibonakalisa njengolwazi lomntu kunye nolwalamano lwabantu ngakwesinye icala, kwaye ngolunye ngokusasazeka ngokwenyama, njengeengxaki, iintlungu, izifo okanye
nezifo. Ulwazi lokuzimela luboniswa ngokuzithiba, ukulawula iimvakalelo neemfuno zakho. Impembelelo yomntu ingabonwa ngexesha leengxaki, xa umntu eyazi nje into ekufuneka yenziwe ngokwabo nakwabanye. Kwakhona kungafika njengengqondo yokukhanyisa kwisifundo.
UMtyholi, The: ngumnqweno omkhulu wobubi. Izama, imigqomo iphinde iqhube enye kwisenzo esingalunganga kwimpilo yomzimba, kwaye iintlungu zokuba enye ngexesha lexeshana emva kokufa.
Imilinganiselo: yimiba, kungekhona yendawo; Isikhundla asikho ubukhulu, indawo ayiyiyo imilinganiselo. Ubukhulu beeyunithi; iiyunithi zizinto ezingabonakaliyo zemiba eninzi; ngoko loo nto yenziwe yenziwe, ihlanganiswe okanye iinqununu ezingabonakaliyo ezinxulumene nazo kwaye zihluke ngabanye ngeentlobo zazo ezithile, njengamanani. Imba inemilinganiselo emine: kwi-in-ness, okanye into yomhlaba; in-ness, okanye angle angle; ukuhamba, okanye umbandela; kunye nobukho, okanye inkalo. Inani lokubala livela kwizinto ezibonakalayo neziqhelekileyo kwiindawo ezikude.
Ubungakanani bokuqala beeyunithi, ii-on-ness okanye ii-unit unit, azikho ubunzulu obucacileyo okanye ubunzima okanye ubungqina; kuya kuxhomekeka kwaye ngokukodwa kufuneka ukuba ububanzi besibini kunye nesithathu buyenze kubonakale, bubonakale, buqinile.
Umlinganiselo wesibini weeyunithi ayikho okanye i-angle; kuxhomekeke kwisilinganiselo sesithathu kuso ukudibanisa iingqimba phezu kwendawo.
Inqanaba lesithathu leeyunithi ukuhamba okanye umbandela; kuxhomekeke kwinqanaba lesine lokuba liphathe, liqhube, lidlulise, lithuthe, lithumele kunye nokuthumela izinto ngaphandle kwezinto ezingabonakaliyo kwaye zilungise kwiindawo kwaye ngoko umzimba uphume kwaye uzinze njengezinto eziqinileyo.
Ubume besine beeyunithi bubume okanye ingqinamba, ukulandelana kweengongoma njengomgca wesigxina somxholo weengongoma, apho okanye ngoluphi umlinganiselo olandelayo wenkalo yomgca wakhiwe kwaye uphuhliswa. Ngaloo ndlela kuya kubonakala ukuba umbandela ongabonakaliyo ungabonakaliswa okanye ngeendlela ezithile, kwaye ngokulandelana kweengongoma njengombandela wobuchule beeyunithi, ngamanzi apho kulandelwa umgangatho olandelayo weeyunithi njengomxholo wodidi, kwaye ngeendlela ezingenanto okanye i-corner matter, ehambelana nemida phezu kweendawo ukuya kufaka into ebonakalayo ebonakalayo eqinile iboniswa njengezenzo, izinto kunye neziganeko zeli hlabathi lemvelo.
Izifo: Isifo siphumela kwisenzo sokunyusa kwengcamango njengoko siyaqhubeka sidlula kwinxalenye okanye umzimba ukuba uphathwe, kwaye ekugqibeleni ukugqithiswa kwengcinga yeso sifo.
Ukungathembeki: ukucinga okanye ukwenza ngokuchasene noko kwaziwa ukuba kulungile, kwaye ukucinga nokwenza kwento eyaziwayo iphosakeleyo. Lowo ukucinga nokwenza oko ekugqibeleni unokuzenza akholelwe ukuba okulungileyo akulungile; kwaye oko kukungalunganga kulungile.
Umenzi: Icandelo eliziwayo nelingenakulinganiswa kwiZiqu zeZiqu zeZiqu ezihlala zikhona kwixesha lomntu okanye umzimba wesifazane, kwaye ngokuqhelekileyo zizibiza njengomzimba kunye negama lomzimba. Zizohlulo ezilishumi elinesibini, ezithandathu zazo zihlangene zaso njengomnqweno kunye neyesithandathu zincinci yecala. Iingxenye ezithandathu ezisebenzayo zomnqweno ziphinde zilandelelanise emzimbeni womntu kunye neengxenye ezithandathu zokuvalelwa ukuba zikhona kwakhona kwiimpawu zentombi. Kodwa umnqweno
kunye nevakalelo azikhe zahlukana; umnqweno emzimbeni womzimba wenza ukuba umzimba ube yindoda kwaye ulawulwe yecala layo; kunye nemvakalelo emzimbeni wesifazana yabangela ukuba umzimba wayo ube ngowesifazana kwaye ulawula umxhesho walo.
Ukungaqiniseki: yimeko yobumnyama bengqondo njengomphumo wokungabikho okwaneleyo ukucinga ukuba wenzeni kwaye ungenzani kwimeko.
Iphupha: ziinjongo kwaye zizithoba. Iphupha lenjongo yimeko yokuvuka okanye isimo sokuvuka; kodwa ke iphupha elivusayo. Iphupha elizithobayo liphupha lokulala. Umehluko kukuba ekuvukeni
ukuphupha zonke izinto okanye izandi ezibonakalayo okanye ezivakalayo kwaye ezibonakala ngathi zinyani zizinto ezithandwayo okanye ezinye iingcamango ezivela kwimvelaphi yehlabathi. kwaye, ukuba izinto esizibonayo okanye siziva kwiphupha lokulala zibonakalisa kwimvelaphi yehlabathi elizimeleyo lezinto ezibonakalayo zehlabathi. Ngelixa siphupha ngokulala, ukubonakaliswa kubonakala ngathi kuyinyani kuthi njengokuba kukho iziqalo kwihlabathi elikhulayo
ngoku. Kodwa, ke, xa siphapheme asikwazi ukukhumbula indlela okwenene iphupha lokulala lalinjalo, kuba kwihlabathi elikhuphayo ilizwe eliliphupha libonakala lithekile kwaye lingenangqondo. Nangona kunjalo, konke esikubonayo okanye esikuvelayo okanye esikuphuphayo xa silele zibonakaliswe ngokungafani okanye ezingaphantsi kwezinto ezenzekayo kuthi nezinto esizicingayo ngethuba sisesimweni sokuvusa. Iphupha lokulala linokufaniswa nesibuko esibonakalisa izinto ezibanjwe phambi kwayo. Ngokucamngca ngeziganeko zephupha lokulala enye inokuyichaza ngokubanzi ngaye, iingcamango zakhe kunye nezenzo zakhe, ukuba akazange azibone. Ubomi bephupha elinye ihlabathi, likhulu kwaye lihluka. Iingcamango azizange zenzeke, kodwa kufuneka zibekwe, zihlulwe, ubuncinane kwiintlobo kunye neentlobo. Emva kokufa kwelizwe kuhlobene nokuphila komhlaba njengokuba iphupha lokulala kwilizwe elikhulayo.
Umsebenzi: yinto ehlawulwa yona okanye kwabanye, ekufuneka ihlawulwe, ngokuzithandela okanye ngokungafunekiyo, kwintsebenzo enjengaleyo mfuneko yelungelo. Imisebenzi ibopha umenzi-ngaphakathi-umzimba ukuba aphile ubomi obuninzi emhlabeni, de kube umenzi akhulule
ukusebenza kwayo yonke imisebenzi, ngokuzithandela nangokuvuya, ngaphandle kwethemba lokudumisa okanye ukwesaba ukusola, kunye nokungabandakanywa kwiziphumo ezifanelekileyo.
"Umhlali": igama elisetyenziselwa ukubonisa umnqweno onqabileyo kwixesha langaphambili lobomi bomenzi walo mzimba womntu, ohlala kwimoya yengqondo kwaye uzama ukunyusa umzimba kunye nokuchaphazela umenzi kwizenzo zobundlobongela, okanye ukuzenza izinto ezinobungozi umenzi nomzimba. Umenzi unembopheleleko yeminqweno yayo, njengomhlali okanye njengengubo yeenkohlakalo; iminqweno ayinakutshabalaliswa; kufuneka ekugqibeleni batshintshwe ngokucinga nangentando.
Ukufa: yinkqubo yokuphefumula yoluqupheko okanye ende ende yokubutha ifomu layo elungileyo ukusuka kwimida ukuya entliziyweni aze azikhukhumeze emlonyeni kunye nokuphefumula kokugqibela, ngokuqhelekileyo kubangele i-gurgle okanye ifakwe emqaleni. Ekufeni umenzi ushiya umzimba ngokuphefumula.
Nciphisa: sisiphumo sokwethembela komenzi kwi-destiny kwaye ngokwayo; isisombululo esithile kwisenzo, kungakhathaliseki ubuncwane okanye ubuhlwempu, isikhundla kwindawo yobomi okanye entsapho okanye ngabahlobo.
Ego: Uvakalelwa kukuba "mna" womntu, ngenxa yobudlelwane bokuvakalelwa kwesazisi se-I-ness ye-Self Triune. I-ego ngokuqhelekileyo ibandakanya ubuntu bomzimba ngokwawo, kodwa i-ego kuphela imvakalelo yesazisi. Ukuba
Ukuziva kwakunobungqina, umvakalelo emzimbeni uyazi ngokwakho njengomntu ongapheliyo ongenasiphelo "I" oqhubekayo naphaya kwexesha lonke ekuqhubekeni okungapheliyo, kanti i-ego yabantu ayayazi malunga nayo
Element, An: ngenye yezinto ezine eziphambili zeeyunithi zendalo apho uhlobo lusetyenziswa khona kunye nokuba zonke izidumbu okanye iziganeko zenziwa, ukwenzela ukuba inxalenye nganye ibonakale ngohlobo lwayo kwizinto ezintathu, kwaye ke ingaziwa ngomlingiswa wayo kunye nomsebenzi, nokuba udibanisa kwaye usebenze njengamandla ommandla okanye ekubunjweni kwanoma yimuphi umzimba.
Elemental, An: iyunithi yobume ebonakalayo njengento yomlilo, okanye yomoya, okanye yamanzi, okanye yomhlaba, ngabanye; okanye njengeyunithi nganye yelungu ngobuninzi beeyunithi zendalo kunye nokulawula ubunzima beeyunithi.
Elementals, Lower: zizinto ezine zomlilo, umoya, amanzi, kunye nehlabathi, apha kuthiwa i-causal, i-portal, ifom, kunye neeyunithi zesakhiwo. Ziyizona zimbangela, utshintsho, abalondolozi, kunye nokubonakala kwazo zonke izinto zendalo
ukuba khona, utshintsho, oluhlala ixesha elithile, kwaye luza kutshabalalisa kwaye luphele, luphinde ludalwe kwezinye izinto.
Elemental, Upper: izidalwa zomlilo, umoya, amanzi, kunye nemimandla yomhlaba, okuphuma kuyo i-Intelligences yee-spheres, okanye i-Triune Selves epheleleyo, eyakha uRhulumente wehlabathi. Ngowabo
ezi zinto azizi nto kwaye azikwazi ukwenza nto. Azinalo iindawo ezizimeleyo ezizimeleyo njengamacandelo enje, kwinkqubo yophuhliso. Ziyadalwa ngaphandle kwendawo engabonakaliyo yimiba ngokucinga, kwaye iphendule ngokugqibeleleyo ekucingeni kwe-Selune eSelune ebenza baqondise kulokho abakwenzayo. Bayabaphulaphuli bomthetho, apho kungekho zithixo zendalo okanye ezinye izinto ezinokubakho. Kwiinkonzo okanye kwizithethe, kunokuthiwa ngeengelosi, iingelosi, okanye izithunywa. Benza ngokulandelelana ngqo koRhulumente wehlabathi, ngaphandle kokusebenza komntu, nangona enye okanye ngaphezulu ingavela ukunika umyalelo kubantu, okanye ukuzisa utshintsho kwimicimbi yabantu.
Umoya: ukuvusa nokubonakalisa umnqweno ngamagama okanye izenzo, ekuphenduleni iintlungu zentlungu okanye ukuzonwabisa ngokuvakalelwa.
Umona: Ingozi yokuthanda okanye ukukrakra kumntu onobani okanye onomdla onqwenela ukuba okanye onayo.
Ukulingana koLuntu: kukuba umntu ngamnye onoxanduva unelungelo lokucinga, ukuba, ukuthanda, ukwenza, nokuba nakho, oko akwaziyo ukukwenza, ukukwenza, ukukwenza nokuba nokuba nako, ngaphandle kokunyanzeliswa, uxinzelelo okanye ukuthintela, ukuya kwinqanaba ukuba akazami
ukukhusela omnye kumalungelo afanayo.
Ongunaphakade, i: yinto engathintekiyo ngexesha, elingenakuqala kwaye elingapheliyo, ngaphakathi nangaphezulu kwexesha kunye neengqondo, zingathembeki, zingalindelekanga okanye zilinganiselwe ngexesha kunye neentsingiselo ezinjengexesha elidlulileyo, langoku, okanye elizayo; ukuba izinto ziyaziwa zifana nokuba ziphi, kwaye ezingenakubonakala ngathi zingekho.
amava: Ingcinga yesenzo, into okanye isiganeko esiveliswa ngeengqondo malunga nokuziva emzimbeni, kwaye impendulo njengempendulo yintlungu okanye ukuzonwabisa, ukuvuya okanye usizi, okanye nayiphi na imvakalelo okanye imvakalelo. Amava yinto ebalulekileyo yokugqithisa umenzi kunye nokufundisa, ukuba umenzi angakhupha ukufunda kumava.
Exteriors, An: sisenzo, into okanye isiganeko esasiyimpembelelo engqondweni ngaphambi kokugqithiswa njengesenzo, into okanye isiganeko kwisiza somzimba, njengesiphelo senyama.
Amaqiniso: ziyinyaniso zeinjongo okanye izenzo ezithobelayo, izinto okanye iziganeko zorhulumente okanye kwi-ndege abaye bafumana okanye abayibonayo, njengoko kubonakala kwaye bazama ngentsingiselo, okanye njengoko kuthethwa kwaye kugwetywa ngesizathu. Iinyaniso zineentlobo ezine: iinyani zomzimba, iinyaniso zengqondo, iingqinisiso zengqondo, kunye neengqinamba zobungqina.
Ukholo: Ingcamango yomenzi owenza ingqiqo ephosakeleyo kwifomu yokuphefumla ngenxa yokwethemba nokuzithemba ngaphandle kokungabaza. Ukholo luvela kumenzi.
Ubuxoki: Ingxelo njengento yinto ekholelwa ukuba ayiyinyaniso, okanye ukukhanyela into ekholelwa ukuba yinyani.
Udumo, (Igama): yimiqulu eguqukayo yokubonakaliswa kweempawu ezingapheliyo zobuntu, ezizenzekelayo njengama-bubbles.
Ukoyika: Uvakalelwa ngengozi okanye ingozi ezayo malunga nokukhathazeka ngengqondo okanye ngokomzwelo okanye ngokomzimba.
Uvakalelwa: yinto yokuzibona komntu emzimbeni ovakalelwa; ovakalelwa ngumzimba, kodwa akachazi kwaye ahlule ngokwawo njengemvakalelo, evela emzimbeni nakwiimvakalelo ezivelayo; yinto engabonakaliyo yomenzi-ngomzimba, osebenzayo kunye nomnqweno.
Uvakalelwa, Ukwahlukana: inkululeko yaso ekulawuleni yimiqondo yomzimba kunye nokuziqonda ngokwayo njengento evuyokileyo.
Ukutya: luyimpahla yendalo ehlanganiswe nemibutho engabonakaliyo yeemveliso zomlilo, umoya, amanzi, kunye nehlabathi, ukwenzela ukwakhiwa kweendlela ezine kunye nokugcinwa komzimba.
Ifom: Ingcamango, uhlobo, iphethini okanye uyilo olukhokela kunye nemilo kwaye imisela imida ebomini njengokukhula; kwaye ifomathi ibambe kwaye ifomathi ifake ukubonakala njengokubonakala.
Inkululeko: lukarhulumente okanye imeko yomnqweno-nomvakalelo womenzi xa izivalekele kwendalo kwaye ihlala ingabandakanyekanga. Inkululeko ayithethi ukuba umntu angathetha okanye enze oko akuthandayo, naphi na apho. Inkululeko yiyo: kuba kunye nokuthanda nokwenza kwaye ngaphandle kokuncedisa nayiphi na into okanye into yeentsimbi ezine; kwaye, ukuqhubeka ukhona, ukuthanda, ukukwenza, nokuba unako, ngaphandle kokuqhotyoshelweyo, ngokucinga, ukuba yeyiphi na okanye uyathanda okanye wenza. Oko kuthetha ukuba awunamathele kwingcamango nayiphi na into okanye into yendalo, kwaye awuyi kuzinamathela xa ucinga. Ukuqhotyoshelweyo kuthetha ukukhoboka.
umsebenzi: yinkqubo yesenzo esenzelwe umntu okanye into, kwaye eyenziwa ngokhetho, okanye ngokuyimfuneko.
Ukugembula: ukunyaniseka komnye ngomoya wokungcakaza, okanye umnqweno onqwenelayo wokufumana, ukunqoba imali okanye into exabisekileyo "ngenhlanhla," ngokuthi "ukubheja," ngokudlala "ithuba," kunokuba uzuze ngomsebenzi onyanisekileyo.
Genius, A: ngulowo obonisa ukuqala kunye nobuchule obuyichaphazela kwabanye kwimimandla yakhe. Izipho zakhe ziyiyo. Abazange bafumane ngokufundisisa kwimeko yangoku. Baye bafumana ingcinga kunye nomzamo kwiindawo ezininzi zobomi bakhe obudlulileyo kwaye baziswa kunye naye ngenxa yexesha elidlulileyo. Iimpawu ezahlukileyo zengqondo zivela kwimibono, indlela kunye nendlela ecacileyo yokubonisa ingqondo yakhe. Akaxhomekeke kwimfundiso yeso sikolo; Ucinga iindlela ezintsha kwaye asebenzise nayiphi na ingqondo yakhe emithathu ekubonakaliseni ukuvakalelwa kwakhe-kunye nomnqweno ngokwezimo. Uthintana neemali zakhe zexesha elidlulileyo ensimini yakhe.
IGerm, iLunar: luveliswa yenkqubo yokuvelisa kwaye kuyimfuneko yokuveliswa komzimba womntu, ukuba ibe yindawo yokuhlala yomenzi okhoyo. Kubizwa ngokuba yi-moon ngenxa yokuba uhambo lwayo emzimbeni lufana nezigaba zokutsalwa kwenyanga kunye nokunciphisa inyanga, kwaye inxulumene nenyanga. Iqala ukusuka kumzimba we-pituitary kwaye iqhubeka nomendo wayo ophantsi kunye neentambo ze-esophagus ne-digestive tract, ngoko ke, ukuba ingalahlekanga, inyukela emlanjeni ukuya entloko. Kwindlela yayo ephantsi iqokelela ukuKhanya okuthunyelwe kwendalo, kwaye kubuyiselwa yendalo ekuthathweni kwindlela yokutya, kwaye iqokelela ukukhanya kwigazi eliphinde lafunyanwa ngokuzithiba.
IGerm, I-Solar: iyinxalenye yomenzi ukuba ekugqibeleni kusemzimbeni we-pituitary kwaye unokukhanya okucacileyo. Kwiinyanga ezintandathu zihla, njengelanga, ngasendleleni esezantsi, kwicala lasekunene lentambo yomgudu; ke lijika, kwi-vertebra yokuqala ye-lumbar, kwaye inyuke kwicala lasekhohlo kwinqanaba layo elisenyakatho kwiinyanga ezintandathu de ifike kumzimba wepineal. Ekubeni ekumzantsi kunye nasenyakatho uhamba ngokujikeleza intambo yomgudu, umendo wobomi obungunaphakade. Iintsholongwane zenyanga ziqiniswa rhoqo ngexesha lidlula intsholongwane yelanga.
Glamour: yimeko apho umntu unomdla ngento okanye into eyenziwa ngopelo, apho iinjongo ziphonsa kwivakalelo zakhe-nangomnqweno, kwaye zimbamba, kwaye zimvimbela ukuba angaboni ngokukhazimulisa, kwaye ukuqonda ukuba into njengoko kunjalo.
Isiqhamo: yimoya yengqondo, ngenxa yokukhathazeka ngokweemvakalelo kunye neminqweno enganelisekanga. Ngaloo nto inokudala umoya wobumnyama obuya kutsala iingcamango zokuphazamiseka nokungahambi kakuhle, oku kunokukhokelela ekwenzeni inzakalimazi kwaye
abanye. Ukunyanga kwesigayegalelo kukucinga okuzimeleyo kunye nesenzo esifanelekileyo.
UThixo, A: yinto yokucinga, eyadalwa ngcamango yabantu njengommeli wobukhulu bento abavakalelwa ngayo okanye bayesaba; njengento nantoni na oyithandayo ukuba abe, ukuthanda, nokwenza.
Urhulumente, ukuzimela: Ukuzimela, ngokwakho, sisistim seemvakalelo kunye neminqweno yomenzi owaziyo ophakathi komzimba womntu kwaye ngubani umqhubi womzimba. Urhulumente igunya, ulawulo kunye nendlela apho umzimba okanye urhulumente ulawulwa khona. Ukuzimelela urhulumente kuthetha ukuba iimvakalelo kunye neminqweno enokuthi ithandeke, ngokukhetha, ukubandlulula okanye ukunqwenela ukuphazamisa umzimba, iya kugcinwa kwaye ikhokelwe kwaye ilawulwa yimvakalelo engcono yinto endiyifunayo, enokucinga nokuyenza ngokuchanekileyo nangesizathu, njengemigangatho yegunya ukusuka ngaphakathi, endaweni yokulawulwa yizinto ezithandwayo nokungathandekiyo malunga nezinto zeengqondo, ezigunyaziwe ezivela ngaphandle komzimba.
Ubabalo: inceba ngothando kwabanye, kunye nokukhululeka kwengcinga kunye nevakalelo ezichazwe kwintsebenziswano eyaziwayo kwifom nasenzo.
Ubukhulu: kwinqanaba lokuzimela kunye noxanduva kunye nolwazi oluhlobene nolwalamano lwakhe kunye nabanye.
U kuhaha: ngumnqweno ongenakunqwenelekayo wokufumana, wokuba nawo, nokuba ubambe nantoni na oyifunayo.
Ground, Common: isetyenziswe apha ukuba uthethe indawo okanye umzimba okanye apho idibano ezimbini okanye ngaphezulu zidibana khona. Umhlaba ngumhlaba wokudibanisa abenzi kwimibutho yabantu ukuba basebenzisane kunye neminqweno yabo. Umzimba womntu ngumhlaba oqhelekileyo wokuthatha isenzo phakathi komenzi kunye neeyunithi zezinto zendalo ezidlula kuyo. Ngako oko umhlaba umgangatho oqhelekileyo apho iingcamango zabantu bonke emhlabeni zichithwa njengezityalo kunye nezilwanyana ezikhulayo kwaye zihlala emhlabeni, kwaye zeziphi izinto ezithintekayo kwiimfuno neemvakalelo zabantu.
Indawo: ibinzana ngamazwi okanye isenzo sengqondo kwifomu yokuphefumula ngokucinga. Ukuphindaphinda izandi ezingaqhelekanga okanye izenzo zivame ukubangela ukungazinzi komntu kunye nombonisi, okungenzeka ukuba ukhulume ngakumbi ngaphandle kokuba isizathu sisuswe. Oku kungenziwa ngokungaqhubeki ukucinga okubangela ukuba umkhwa, okanye ukucinga okulungileyo: "yeka" kwaye "ungaphindi" -ngakhathaliseki igama okanye isenzo. Ukucinga okulungileyo kunye nesimo sengqondo esichasene nomkhwa kuya kutshabalalisa ingcamango kwimo yokuphefumula, kwaye ukukhusela ukuphindaphinda kwayo.
IHolo Ye sigwebo: emva kokufa kwimeko apho umenzi ufumana khona. Oko kubonakala ngathi kukho iholo lokukhanya ngokuqinisekileyo yinkalo yoLwazi lokuKhanya. Umenzi uyamangalisa kwaye uyothuka kwaye uza kusinda, naphi na, ukuba ingaba; kodwa
ayikwazi. Uyazi ukuba ifom, ehlabathini, ikholelwa ukuba yedwa, nangona ayikho kuloo fomu; ifomu yimo yokuphefumla ngaphandle komzimba wenyama. Ngalo okanye kule fomu yokuphefumula, ukukhanya okuKhanya, iNyaniso, kwenza ukuba
umqapheli konke okwakucinga, kunye nezenzo ezenzileyo ngexesha lomzimba wakhe emhlabeni. Umenzi uyazi ezi zinto, njengokuba ukukhanya okuKhanya, iNyaniso, kubonisa ukuba, kwaye umenzi ngokwakhe uyabagweba, kwaye
isigwebo senza ukuba sibe nesibophezelo kubo njengemisebenzi yobomi besikhathi esizayo emhlabeni.
Lonwabo: sisiphumo sento umntu acinga ngayo kwaye akwenza ngokuhambelana nokufaneleka-kunye-isizathu, kunye nesimo somnqweno-kunye nesimo xa bekunye kunye kunye
Ukuphiliswa Ngokubeka Kwezandla: Ukuze uzuze isigulane, umphululi kufuneka aqonde ukuba uyisisitya sokuzithandela esisetyenziselwa uluntu ngenjongo yokuvuselela kwakhona ukuhamba ngokulandelelana kobomi okuye kwaphazamiseka
okanye ukuphazamiseka emzimbeni wesigulane. Lo mphilisi unokukwenza ngokubeka iintende zezandla zakhe zangasese nezisekhohlo ngaphambili nangemuva kwentloko, kwaye emva kwezi zintathu zengqondo, kwi-thorax, isisu, kunye
i-pelvis. Ngokwenza njalo umzimba wonyango uyisisitya apho amandla kagesi kunye namagnetic agqitha aze afake ukulungiswa komatshini wesigulane ngokusebenza ngokulungeleleneyo ngokwemvelo. Umphili kufuneka ahlale
ukuthanda okuhle, ngaphandle kokucingelwa ukuhlawula okanye ukufumana.
Ukuphilisa, Ingqondo: ngumzamo wokunyanga ukugula ngokomzimba ngeendlela zengqondo. Kukho izikolo ezininzi ezama ukufundisa nokusebenzisa ukunyanga kwesifo ngengqondo yengqondo, njengokungavumi ukuba kukho isifo, okanye ngokuqinisekisa impilo
endaweni yesifo, okanye ngomthandazo, okanye ngokuphindaphinda kwamagama okanye amabinzana, okanye nayiphi na enye ingqondo. Ukucinga kunye nemvakalelo kuthinta umzimba, ngethemba, intliziyo, uvuyo, intlungu, inkathazo, ukwesaba. Ukunyangwa kwesifo esona sinako
ezichaphazelekayo ngokulinganisa kweso sifo kukugqithisa. Ngokususa eso sizathu, isifo siyanyamalala. Ukulahlwa kwesifo kukukholelwa. Ukuba kwakungenaso isifo bekungekho nto yokuphika. Xa kukho impilo, akukho nto ifumanekayo ngokuqinisekisa oko sele sele.
Ukuva: iyunithi yomoya, isebenza njenge-ambassador ye-element element air in the body body. Ukuphulaphulwa ngumzila apho umoya wendalo kunye nenkqubo yokuphefumula emzimbeni uqhagamshelana nomnye. Ukuphulaphula yileyunithi yendalo ehambayo kwaye iyalathatha kwaye ivelise izixhobo zeprogram yokuphefumula, kunye nemisebenzi njengento yokuvavanya ngobudlelwane obufanelekileyo bezitho zayo.
E zulwini: lukarhulumente kunye nexesha lo lonwabe, aluphelelwanga ngexesha lokuphila emhlabeni, kwaye kubonakala kungenakuqala. Yingqungquthela yeengcamango zonke kunye neengcinga zobomi emhlabeni, apho kungekho ngcamango yokubandezeleka okanye
Ukungonwaba kungangena, kuba ezi zikhumbuzo zisuswe kwifomu yokuphefumula ngexesha le-purgatorial. Izulu liqala ngokwenene xa umenzi ekulungele kwaye ethatha umoya wakhe wokuphefumla. Oku akubonakali njengesiqalo; kunjengokuthi bekuhlala njalo. Izulu liphela xa umenzi aphelile kwaye aphelelwe amandla iingcamango nezenzo ezintle ayenayo nakwixesha elisehlabathini. Emva koko iimbono zokubona nokuva kunye nokunuka kunye nokuvumba zikhululiwe ukusuka kwifomu yokuphefumla, kwaye ziya kwizinto apho zithethwa emzimbeni; isahlulo somenzi sibuyela kuye ngokwaso, ubuqili, apho kufike ukufika kwayo ukuza kubakho kwakhona emhlabeni.
Isihogo: ngumntu ngamnye okanye imeko yokubandezeleka, yokuhlushwa, kungekhona yintlangano yoluntu. Ukubandezeleka okanye ukuhlushwa kungenxa yecandelo leemvakalelo kunye neminqweno eyahlukana nayo kwaye yatshitshiswa ngumenzi kumgca wayo ngokusebenzisa i-metempsychosis. Ukubandezeleka kukuba imvakalelo kunye neminqweno ayinayo okanye ngaba bayakwazi ukukhululeka, okanye ukufumana into abayidabulayo ngayo, isifiso kunye nesifiso. Yiyo yabo intlungu yokuhlushwa. Nangona esemzimbeni womzimba emhlabeni, iimvakalelo ezilungileyo nezimbi kunye nexesha labo lovuyo kunye nosizi oluye lwadibanisa kulo lonke ubomi emhlabeni. Kodwa ngexesha le-metempsychosis, inkqubo ye-purgatorial ihlukanisa ububi kwizinto ezilungileyo; ezilungileyo zihlala zivuya xa zingenakunqwenela ukuhlala "ezulwini," kwaye ububi buhlala kwiintlungu zokubandezeleka, apho iimvakalelo kunye neminqweno enokuthi ibe yinto ekhutshwe ngayo, ukwenzela ukuba xa bahlanganiswa kwakhona, banako, ukuba bayakukhetha, babalekele ububi kunye nenzuzo kwizinto ezilungileyo. Izulu kunye nesihogo kukufumana, kodwa kungekhona ekufundeni. Umhlaba yindawo yokufunda kumava, kuba umhlaba uyindawo yokucinga nokufunda. Kwilizwe emva kokufa iingcamango nezenzo zifana nokuphupha kwakhona, kodwa akukho zizathu okanye ukucinga okutsha.
Ulungelo: Ngokuqhelekileyo kuyaqondwa ukuba uthetha ukuba iimpawu zomzimba nezengqondo, iimpawu kunye neempawu zokhokho babo ziyahanjiswa kwaye zizuzwe njengelo mntu. Ngokuqinisekileyo, oku kufuneka kube yinyani kwinqanaba elithile ngenxa yobudlelwane begazi kunye nosapho. Kodwa inyaniso ebaluleke kakhulu ayinikwe indawo. Okokuthi, ukuba umvakalelo-kunye nomnqweno womenzi ongafi uhlala kwindawo yomzimba emva kokuzalwa kwayo kwaye ivelise ingqondo yakhe kunye nomlingani nayo. Ulwahlulo, ukuzalana, imvelo kunye nemibutho ibalulekile, kodwa ngokubhekiselele kumgangatho wayo kunye namandla amandla umenzi uyahlula ezi zinto. Ifomu yokuphefumula yomenzi ibangela ukukhulelwa; ifom inika iinqununu zomqulunqo kunye nokuphefumula kwakha into ebonakalayo ngumama, kwaye emva kokuzalwa ifom-fomu iyaqhubeka yokwakha nokugcina ifom yayo
kuzo zonke izigaba zokukhula kunye nobudala. Umenzi kumzimba ngamnye womntu ungaphaya kwexesha. Ifomu lokuphefumla yalo liqule imbali yalo, echasayo yonke imbali eyaziwayo.
Ukunyaniseka: umnqweno wokucinga kunye nokubona izinto njengoMkhanya wokuCamngca ekucingeni kubonisa ezi zinto njengokuba zikhona kwaye emva koko ukujongana nezinto ezifana noKhanya koNgcono kubonisa ukuba kufuneka ziqwalaselwe.
Ithemba: ukukhanya okusemgangathweni kumntu owenzayo kuyo yonke into ejikelezayo entlango yehlabathi; iholele okanye iqhube kakuhle okanye igule ngokwemimiselo yomenzi; ihlala isingaqinisekanga malunga nezinto zentliziyo, kodwa iqinisekile ukuba imigaqo yezizathu.
Ukubangumntu, A: ukwakhiwa kweeyunithi zezinto ezine zendalo ezidibeneyo kwaye ziququzelelwe njengezisele kunye nezitho zibe ziimodeli ezine ezimelelwe ziintlobo ezine zokubona, ukuva, ukunambitha, kunye nephunga, kwaye zilungelelaniswa ngokuzenzekelayo kwaye ziqhutywe ngumoya ophefumlelweyo, umphathi jikelele yomzimba womzimba okanye umzimba wesetyhini; kwaye, apho inxalenye yomenzi ungena kwaye iphinda ikhona, kwaye yenza isilwanyana sibe ngumntu.
Abantu, iiKlasi ezine: Ngokucinga abantu bahlule ngokwezigaba ezine. Iklasi elithile apho elowo likhona, uzibeke ngokucinga kwakhe; uya kuhlala kuyo ngokude ecinga nje ngokuba wenza; uya kuzikhupha kuyo kwaye azibeke kwezinye iiklasi ezine xa ecinga ukuza kumfaka eklasini apho uya kuba khona. Ezi zifundo zine zi: abasebenzi, abahwebi, abacinga, i
ababazi. Umqeshwa ucinga ukuba anelise iminqweno yomzimba wakhe, ukunqwenela nokududuza komzimba wakhe, kunye nokuzonwabisa okanye ukuzonwabisa kwimizimba yakhe. Umhwebi ucinga ukuba anelise umnqweno wakhe wokufumana inzuzo, ukuthenga okanye ukuthengisa okanye ukuchithwa ngenzuzo, ukufumana impahla, ukuba nobutyebi. Umcingeli ucinga ukuba anelise umnqweno wakhe wokucinga, ukucinga, ukufumana, kwimisebenzi okanye ubugcisa okanye isayensi, nokuzigqwesa ekufundeni nasekufezeni. Umazi ucinga ukuba anelise umnqweno wokwazi izizathu zezinto: ukwazi ukuba ngubani kwaye yintoni kwaye kwaye kwaye nini kwaye njani kwaye kutheni, kwaye ukunika abanye oko yena ngokwakhe azi.
Ubuntu: ngumthombo oqhelekileyo kunye nolwalamano lwabantu abangenangomzimba nabangapheliyo emzimbeni womntu, kwaye unengqondo evelwano kubantu abanobuhlobo.
Hypnosis, Self-: kukuzibophezela ngokuzithandela kwiimeko zobuthongo obunzima ngokuzibamba nokuzilawula ngokwakho. Injongo yokuzichukumisa imele ibe yinto yokuzilawula. Ngokuziphathekayo umenzi wenzalo nje ngokuba ngu-hypnotist kunye nesihloko. Uqwalasela oko angathanda ukwenza oko akakwazi ukukwenza. Emva koko, esebenza njenge-hypnotist, uyazicacela ngokucacileyo ukuba akhuphe le miyalelo kuye xa elele ebuthongweni. Emva koko, ngokucetyiswa, uzibeka elele ngokuzixelela ukuba uya kulala, kwaye ekugqibeleni ulele. Xa elele ubuthongo uyazilawula ukwenza izinto ngexesha kunye nendawo. Xa uye wayiyala ngoko, uya kubuya evuka. UVukani, wenza njengenjongo yokuba enze. Kulo mkhuba omnye makangabikho nkohliso kuye, mhlawumbi uya kudideka aze angaphumeleli ekuziphatheni.
Hypnotism okanye Hypnosis: yimeko yokulala yokuvelisa kwisifundo esicinezelekileyo ukuba i-hypnotized. Esi sifundo sizenza okanye sibe yinto engathandeki kumntu oxhomekeke kwi-hypnotist. Isihloko sizinikela sakhe
ukuziva-kunye nomnqweno wokuvakalelwa-kunye nomnqweno we-hypnotist kwaye ngokwenza njalo unikezela ukulawula indlela yakhe yokuphefumla kunye nokusetyenziswa kweengqondo zakhe ezine. I-hypnotist igxininisa isihloko ngokusebenzisa nayiphi na okanye yonke amandla akhe kagesi-magnetic ngamehlo okanye ilizwi kunye nezandla zesifundo sakhe kwaye ngokuphindaphindiweyo kumxelela ukuba uya kulala kwaye ulele. Ukuzithoba kwisiluleko sokulala esi sifundo silala. Ukuzithoba kwakhe, wakhe
uhlobo lokuphefumula kunye neengqondo zakhe ezine ekulawuleni i-hypnotist, umxholo usemgangathweni ukuthobela imiyalelo kwaye wenze nantoni na iyalwe ngumntu ongenayo ngaphandle kokwazi oko akwenzayo-ngaphandle kokuba akakwazi ukwenza ulwaphulo-mthetho okanye enze isenzo sokuziphatha okubi ngaphandle kokuba ayenokuthi avuke okanye asebenze. I-hypnotist ithatha uxanduva olunzulu xa exela umntu. Isihloko kufuneka sihlupheke ngexesha elide ukuvumela ukuba lilawulwe lenye. Ngamnye kufuneka asebenzise ukuzithiba ade alawulwe. Emva koko akayi kulawula omnye okanye avumele omnye ukuba amlawule.
Hypnotist, A: ngumntu onokuthanda, ukucinga kunye nokuzithemba kwaye ngubani ophumelelayo ekuxhaseni izifundo zakhe nokuvelisa iziganeko zokuxhomekeka kwizinga elithile ekusebenziseni ngazo ngokuqonda.
"Ndiye" njengoLwazi, Ubuxoki: Uvakalelwa kukuba ubukho boqobo be-I-ness yomntu owaziyo. I-ness yiyo yesazisi yesazisi yesazi, ingatshintshi kwaye ingenakuqala okanye iphele kwi-Eternal.
Ukucinga ngengqondo yomzimba kunye nokuziva ukuba kukho ubungqina bokwenene, ukhohlisa umenzi kwi nkolelo yokuba enye iyafana kunye nomzimba kunye neengqondo.
Efanelekileyo: Ingqiqo yinto efanelekileyo ukuba umntu acinge, ukuba, ukwenza, nokuba nokuba nayo.
Ubunikazi bomntu: Uvakalelwa kukuba ungubani emzimbeni womntu, ukuvakalelwa kwakhe ngoku kufana noko kwakunjalo ngaphambili, kunye nesimo esifanayo kwixesha elizayo. Ukuvakalelwa kweso sazisi kuyimfuneko kwaye kuqinisekiswe kumenzi ngomzimba, ngenxa yokungahambelani kwayo kwesazisi somntu onguThathu.
I-ness: Ingumntu ongeyinto engafaniyo, engapheliyo, engaguqukiyo ye-Triune Self kuPhakade; engabonakaliyo, kodwa ubukho bakhe bukwenza ukuba uzive emzimbeni womntu ukuba ucinge kwaye uzive kwaye ukhulume ngokwawo ngokuthi "I" kwaye uqaphele ubungqina obungaguqukiyo kulo lonke ubomi obuntshintshayo rhoqo lomzimba walo.
Ukungazi: Ubumnyama bengqondo, urhulumente apho umenzi-ngomzimba, ngaphandle kolwazi ngokwalo kunye nokufaneleka nokuqiqa. Iimvakalelo kunye neminqweno yemvakalelo yakhe kunye nomnqweno kuye kwacima umcangcozi nomazi wayo.
Ngaphandle koKhanya okuNonophelo okuvela kubo kusebumnyameni. Ayikwazi ukwahlula kwiintliziyo kwaye umzimba uphakathi.
Uluhlu: Impazamo yezinto ezintle okanye ezibonakalayo ngokwenene, njengenqabileyo yokuba yindawo okanye indawo ebonisa ngayo, okanye iposi elide ukuba libe yindoda; nantoni na ekhohlisayo iingqondo kwaye ibangela impazamo kwisigwebo.
I ngcamango: lukarhulumente apho ukucinga kwintliziyo-nomnqweno unikeza ifom.
Ucinga, Uhlobo-: ngumdlalo ongavumelekanga kunye nokungalawulwa kokungabonakali kweengqondo kunye neenkumbulo; ukudibanisa okanye ukudibanisa imifanekiso eyenziwa kwifomu yokuphefumla ngeentsingiselo ngeemvakalelo ezifanayo, kwaye naluphi udibaniso olumelela okwenyani kwendiza yomzimba. Ezi mpawu ezinamandla ziphoqa, kwaye zingenza ukuba ukuqiqa.
Incubus: ifom ebonakalayo engabonakaliyo efuna ukunyamekela okanye ukuba neentlobano zesini kunye nomfazi ngexesha lokulala. I-Incubi iindidi ezimbini, kwaye kukho iintlobo zentlobo nganye. Eyona nto ixhaphakileyo yinto yesondo, enye i-incubus ezama ukuyikhathaza loo ntokazi, njengento ekuthiwa yi-nightmare, iphi iphupha elibi kakhulu libangelwa ukuhlanjululwa okanye ukuphazamiseka komzimba. Uhlobo lwe-incubus luya kuxhomekeka kwimikhwa yengcamango kunye nemeko yesenzo somntu olala ngexesha lokuvuka kwakhe. Ifom ye-incubus, ukuba ibonisiwe, iyahlukahluka kweso sithunywa okanye unkulunkulu, kumtyholi okanye isicabangca okanye i-boar.
I-Instinct kwizilwanyana: iyinamandla okuqhuba ukusuka kumntu osekuleso silwanyana. Ukukhanya okuvela kumntu, okubophelelwe ngumnqweno, yilokho ekhokela okanye ekhokela isilwanyana kwizenzo zalo, ngokwezinto ezine zendalo.
Ubulumko: yiyo yonke i-Intelligences edibeneyo kwaye iyahlukana kwaye iyalathatha kwaye isebenzise ubudlelwane babo bonke abantu abaqaphelayo; kwaye, apho, njengamadigri abo ahlukeneyo, ngokucacileyo, bahlule, bahlule baze baxele zonke iiyunithi okanye iindidi zeeyunithi ngokuhambelana kwazo.
Ubulumko, iAn: Yona myalelo ophezulu kakhulu kwiiyunithi eziMhlabeni wonke, ezimalunga nokuzimela koMntu weZiqendu kunye noBugcisa obuPhezulu ngokuKhanya kwakhe okuzimeleyo, apho kuphakamisa umntu kwaye kumenza akwazi ukucinga.
Ubulumko, iikhokhthi ze: Kukho ezisixhenxe: ukukhanya kunye nam-i-faculty elawula ulawulo lomlilo; ixesha kunye neenjongo zobuchule ezilawula ummandla womoya; umfanekiso kunye namacandelo amnyama kummandla wamanzi; kunye nobuchule bokugxila kummandla womhlaba. I-faculty nganye inomsebenzi wayo kunye namandla kunye nenjongo kwaye ayihambelani ngokuthe ngqo kunye nabanye. I-faculty yokukhanya ithumela ukukhanya kwihlabathi ngeendlela zokuziThumela kwayo; ixesha
ubuchule buyona obangela umgaqo kunye nokutshintsha kwiinqununu zendalo ngokuhambelana kwabo. Ubungakanani bombuso bubangalisa umbono wefomu kwimiba. Amagunya okugxilwa kwamagunya ngamanye amaqhinga kulo mbandela
lathiswe. I-faculty ebumnyama iyamelana okanye inika amandla kwezinye iinjongo. Iinjongo zesisusa sinika injongo nenjongo yokucinga. I-i-faculty yi-Self ye-Intelligence. I-faculty yokugxila kukuphela komntu odibana nomzimba ngokusebenzisa umenzi emzimbeni.
Ubulumko, Ophakamileyo: umlinganiselo kunye nesigxina esiphezulu sokuba inyununu enobuchule iyakwazi ukuqhubela phambili ekuqapheliseni njengeyunithi. I-Intelligence Intelligence ibonisa kwaye iyayiqonda zonke ezinye i-Intelligences kule mihlaba. Akuyena umbusi wezinye i-Intelligences, kuba i-Intelligences iyayazi yonke imithetho; bawumthetho kwaye uNgqiqo ngamnye ulawula ngokwawo kwaye ucinga kwaye wenza ngokuvisisana nomthetho wendawo yonke. Kodwa i-Intelligence Intelligence inomsebenzi wayo kunye nolawulo
zonke iindidi kunye nehlabathi kwaye uyazi oothixo kunye nabantu kwiimeko zonke.
Intuition: imfundiso, isifundo esivela ngaphakathi; lwazi oluchanekileyo oluvela kwisizathu kumenzi. Akunakhathazeka ngorhwebo okanye kwimicimbi yeengqondo, kodwa ngemibuzo yokuziphatha okanye kwiingcali zefilosofi, kwaye ayinqabile. Ukuba umenzi angavula unxibelelwano nomazi walo, unokukwazi ukuba nolwazi nasiphi na isifundo.
Ukholo: unomvakalelo-nomnqweno womenzi, uyazi ukuba inyaniso ngokwayo, ngokwayo; kungekho njengokuba khona, kungekhona, kodwa ekuhambeni kwayo okubangelwa ukuxhatshazwa ngokwaso ngokwayo kwimibono yendalo.
Nomona: Uloyiko oluvuthayo kunye nolwesifo se-jaundiced lokungabikho okanye ukufumana amalungelo kumntu okanye ukuthandwa komnye okanye kwabanye.
Uvuyo: lithetha ukuvakalelwa kunye nomnqweno womntu othembekileyo kuye.
Ubulungisa:sisenzo sokwazi ngokumalunga nesifundo esicatshulweyo, kunye nesigwebo esichazwe kwaye sichazwe njengomthetho.
Karma: iziphumo zezenzo kunye nokuphendula kwengqondo nomnqweno.
Ukwazi, I: Yiyo yoLuntu lweZiThathu oluye nolwazi lwangempela kunye nolwazi lwangempela, lwangoku kunye nexesha elingunaphakade.
Ulwazi luLwimi lweMibini: okwenene okanye uLwazi lokuzimela nolwazi- okanye ulwazi lomntu. Ukuzifunda ngokwabo kwiZiqu zokuziThamela akusiyo iphela kwaye ayinakulinganiswa kwaye iyaqhelekileyo kubabazi bazo zonke i-Triune Selves. Akuxhomekeke kwiingqondo nakuba ziquka zonke izinto ezenzeke kwihlabathi; Oku kukuxhalabisa yonke into ukusuka kwinqanaba elincinane eliphuhliswayo yendalo ukuya kwiZizi ezintathu zeZizwe zonke kwihlabathi lonke ixesha lonke kwi-Eternal. Lona ulwazi olwenene noluntshintshi ngexesha elifumanekayo kwiinkcukacha ezincinci kwaye njengento ehambelana ngokupheleleyo kwaye igqibe ngokupheleleyo.
Ulwazi lwesayensi, inzululwazi okanye ulwazi lomntu, isistim esele siqokelelwe kunye nesistim ehambelana nemvelo yenziwa njengemithetho yemvelo, okanye ifunyanwa ngababenzi ngeengqondo zabo ezingaphelelwanga kunye namagqabha angaphelele. Kwaye ulwazi kunye neengxelo zemithetho kufuneka zitshintshwe ngezikhathi ezithile.
Ulwazi loMenzi: Ingundoqo yesifundo somenzi ngokucinga. Ukukhanya kukhululiwe kwizinto ezinamathelwano kunye nokubuyiselwa kwimoya yomhlaba, ukulinganisa kweengcamango zayo, akunakulinganiswa kwaye unganakwenzeka, ngoko ke ulwazi; akusiyo "ulwazi" lomntu.
Ulwazi lweNgqiqo yeZiqu zoButhathu: iquka lonke ulwazi malunga nokulawulwa komthetho nobulungisa kumenzi walo, kunye nobudlelwane bomenzi kunye nabanye abenzi kwimibutho yabantu, ngokucinga kwabo.
Bonke abacingayo bayazi umthetho. Bahlala bevumelana kunye kunye nabafundi babo ekulawuleni i-destiny kubasebenzi babo kwimibutho yabantu. Ulwazi lwabo lomthetho nobulungisa luvimbela ukungathandabuzeki kwaye luvimbela ithuba lokuthanda. Umenzi kuwo wonke umzimba womntu ufumana isigqibo salo njengoko sikwenza. Oko kukuthi, umthetho kunye nobulungisa.
Ulwazi loLwazi lweZiThathu, uLwazi loLwazi: liquka kwaye libandakanya yonke into kwihlabathi eline. Njengoko uqobo ulwaziyo, kwaye njengoko i-i-ness ichaza kwaye iyona yesazisi. Yayixhasa
ukufundela kwimvelo njengeyunithi yendalo. Apho kwakukuqonda as umsebenzi wayo ngokulandelelana kuzo zonke iindawo zomatshini wendalo. Xa liba nguMntu woBu-Triune kwiLwazi lokuziLwazi loBuchule balo kwiNaphakade, yonke into
umsebenzi oye wawuqwalasela ngokukhawuleza ngexesha lifumaneka ngokukhawuleza, elingenamkhawulo ngexesha, kwiNaphakade. I-ness of knower ichonga umsebenzi ngamnye kwaye yiyo yesazisi apho iyunithi yayiyazi, kwaye ukuzimela komazi uyazi kwaye nolwazi ngalowo msebenzi ngamnye ngokwahlukileyo, njengokuba ngexesha, kwaye bonke bahlanganisene kwi-Eternal. Olu lwazi lunikezelwa kumcingeli ngengqondo ye-I-ness nokuzimelela, kwaye inokufumaneka kumenzi njengonembeza ngokuchanekileyo, kwaye njengengqondo yokuqiqa.
Ulwazi, iNoetic (Izwe loLwazi): lenziwe ngama-noetic atmospheres abo bonke ababazi be-Triune Selves. Kukho lonke ulwazi lwe-Self Triune Self lukhoyo kunye nesevisi yabo bonke abanye ababazi.
Umthetho: ngumyalelo wokusebenza, owenziwe ngcamango nezenzo zomenzi okanye abenzi bawo, kwaye abo bababhalisile baboshwe.
UMthetho weNdalo, A: isenzo okanye umsebenzi weyunithi eyaziwayo njengomsebenzi wayo kuphela.
Umthetho wokucinga, iThe: kukuba yonke into ebonakalayo kwiplanti yomzimba yinkqubo yokucwangciswa kwengcamango ekufuneka ilinganiswe yile yenzeke, ngokwemfanelo yakhe kunye nokuhlanganiswa kwexesha, imeko
Umthetho wokuCinga, iCommin. Agents of: Umntu ngamnye uyintsebenziswano elungileyo okanye ngobubi ngenxa yenjongo yakhe ebomini nangento acinga ngayo noko akwenzayo. Ngento acinga ngayo nokwenzayo, umntu uzilungele ukuba asetyenziswe ngabanye. Abantu abanako ukusetyenziswa okanye ukunyanzeliswa ukuba benze ngokumelene neenjongo zabo zangaphakathi, ngaphandle kokuba bazibandakanya zabo iingcamango nezenzo zabo. Emva koko baphenjelelwa ukwenza okanye ukuveliswa ngabanye abantu, ngakumbi xa bengenawo
injongo ecacileyo ebomini. Abo baneenjongo zixhobo, kuba, nayiphi na injongo, iya kulungelelanisa okanye kubenokubi ngoRhulumente wehlabathi ngabaxhasi abaziwayo bomthetho.
U kufunda: yinto ebalulekileyo yamava avela kumava ngokucinga, ukuze ukuKhanya kukhululeke kwaye loo mava akufuneki aphindwe. Ukufunda kukusetyenziswa kweentlobo ezimbini: ukufunda-ukufunda njengamava, ukuzama, ukujonga, kunye nokurekhoda kwezi zikhumbuzo ezinxulumene nemvelo; kwaye, ukufundwa komenzi njengemiphumo yokuzicingela ngokwawo njengesivakalelo-kunye nomnqweno kunye nolwalamano lwabo. Iinkcukacha zokufunda imemori zingadlulela ebomini bomzimba kodwa ziya kulahleka emva kokufa. Oko umenzi owaziyo ngokwayo njengoko ehlukileyo kumzimba akayi kulahleka; oya kuthi emva koko abe nomenzi ngokusebenzisa ubomi bakhe emhlabeni njengolwazi lwalo.
Uxoki, A: ngumntu othetha ngokunyanisekileyo oko akuyazi ukuba akunjalo, akunjalo.
U khu luleko: ukukhuseleka entolongweni okanye ebukhoboka, kunye nelungelo lokwenza omnye njengoko kuthanda, ngaphandle nje kokuba umntu engaphazamanga nelinye ilingana nelungelo elilinganayo.
Ubomi: iyunithi yokukhula, umphathiswa wokukhanya ngefomu. Ubomi busebenza njenge-arhente phakathi kwelapha ngasentla kunye nezantsi, ukuzisa intlawulo kwi-intanethi kunye nokuvuselela nokuguqula yonke into ekuhlaziyweni. Kuyo yonke imbewu kukho inkalo yobomi. Kwindoda yimoya yokuphefumula.
ubomiUkuqonda okubalulekileyo koMntu): kuninzi okanye ngaphantsi kobusuku obunzima, uluhlu olubonakalayo kodwa olungenakuqinisekiswa lwezinto ezikhawuleza okanye ezide zenzeke, ezininzi okanye ngaphantsi kwezinto eziqinileyo-ezinzulu-phantasmagoria.
UkuKhanya: yinto eyenza izinto zibonakale, kodwa ezingenakubonwa ngokwazo. Yakhiwe iinqununu zenkwenkwezi okanye ukukhanya kwelanga okanye ukukhanya kwenyanga okanye ukukhanya komhlaba, okanye ukudibanisa okanye ukuboniswa kwale mibane njengombane okanye njengokutsha kwegesi, umbane okanye iziqulatho.
UkuKhanya, Ukufikelela kunye nokungafinyeleli: Ukukhanya koBuchule boBulumko obubolekwa kwi-Triune Self, okwenziwa ngumenzi-ngomzimba ekucingeni kwayo. Ukukhanya okubonakalayo yiloo nto umenzi othumela ngayo kwimvelo ngeengcamango kunye nezenzo zakhe, kwaye uyayilondoloza kwaye isebenzise kwakhona. Ukukhanya okungafihlakeleyo yiloo nto umenzi oyenzayo uye wabuya engenakwenzeka, kuba ulungelelanise iingcinga ekukhanyeni. UkuKhanya okwenziwe kungenakukwazi ukuhlawuleka kuyabuyiselwa kwimoya yomntu kwaye kuyafumaneka kuloo nolwazi.
Ukukhanya, Ukuqaphela: UkuKhanya okwenziwa yi-Triune Self ukusuka kwiNgqiqo yayo. Akuyinto yendalo okanye ayibonakaliswa yendalo, nangona, xa ithunyelwa kwintlobo kunye nabadibanisa neeyunithi zendalo, imvelo ibonakala ibonakala
ubulumko, kwaye kunokuthiwa nguThixo kwindalo. Xa, ngokucinga, ukuKhanya koNgcono kuguqulwe kwaye kubanjwe nantoni na, kubonisa ukuba into iya kuba njalo. Ngoko ukuKhanya koNgcono yiNyaniso, kuba iNyaniso ibonisa izinto
njengoko kunjalo, ngaphandle kokukhetha okanye ukubandlulula, ngaphandle kokuguquka okanye ukuzenzela. Zonke izinto zaziwe ngazo xa ziphendukile kwaye zigcinwe kuzo. Kodwa ukuKhanya koNgcono kuboniswe kwaye kufihliwe ngcamango xa ukuzama ukuziva-kunye nomnqweno
ukucinga, ngoko umntu ubona izinto njengoko ufuna ukuzibona, okanye kwidideji yeNyaniso.
UkuKhanya kuMenzi, Ubunokwenzeka: Xa umntu eqhuba imisebenzi engahambisani, engaxolisi kwaye enemihlali ngenxa yokuba uyimisebenzi yakhe, kwaye kungekhona ngenxa yokuba uya kuzuza okanye azuze okanye ayilahle, uyalinganisa iingcamango zakhe ezenza ezo zinto yakhe imisebenzi, kunye noKhanya okuyikhululayo xa iingcamango zilinganisela kumnika umxholo omtsha wokuvuyela inkululeko. Inika ingqiqo kwizinto kunye nezifundo awazange aziqonde ngaphambili. Njengoko eqhubeka ekhulula ukuKhanya ayekugcine eboshwe ezintweni ayenqwenelayo kwaye wayefuna, uqala ukuziva nokuqonda ukukhanya okukhona okukuye kwaye okuya kuba nguMkhanya woKhathalelo owenene xa eba nguNgqiqo.
UkuKhanya kweNdalo: impendulo, njengokukhanya, ukukhanya, ukukhanya okanye ukukhawuleza kokuhlanganiswa kweeyunithi zendalo, ukukhanya koNgcono kuthunyelwe kwindalo ngababenzi ngemizimba yabantu.
Unxibelelwano lweeNyunithi, i-Breath-: uyabamba kwaye iphethe iiyunithi ezihambayo zezinto eziqhaqhaqhaqhazelisayo, kwaye ikhonkco apho umoya udibaniswe neyunithi yokuxhumanisa ubomi yeseli yayo.
Isixhobo soqhagamshelwano, i-Life-: ubamba kwaye ubambe iiyunithi ezihamba phambili ze-airy, kwaye unxibelelwano apho ubomi budibaniswe nefom-link kunye nee-unit link-link links
Isixhobo soqhagamshelwano, iFomu-: ubamba kwaye ubambe iiyunithi ezidlulileyo zezinto ezichaphazelekayo, kwaye idibaniswe ne-cell-link kunye neeyunithi zokuqhagamshela ubomi zeseli yayo.
Unxibelelwano lweeNyunithi, i-Cell-: ubamba kwaye ubambe iiyunithi ezidlulileyo zemiba eqinile, kwaye leyo idibaniswe namanye amaseli egumbini okanye inxalenye yomzimba.
"Umphefumlo olahlekileyo," A: Into ebizwa ngokuthi "umphefumlo olahlekileyo" akusiyo "umphefumlo" kodwa inxalenye yecandelo lomenzi, kwaye akusiyo isigxina, kodwa ixeshana, ilahlekile okanye inqunywe kwiindawo zayo zokuqala kunye nezinye iziqephu zomenzi. Oku kwenzeka xa, kwicandelo elinye lababini, isahlulo somenzi sinexesha elide liye laqhubeka lizingca ngokugqithiseleyo kwaye lisetyenzisile ukuKhanya okuyibolekileyo ngokukhwabanisa ngamabomu, ukubulala, ukuchithwa, okanye inkohlakalo kwabanye kwaye ibe lutshaba kuluntu. Emva koko ukuKhanya kuhoxiswa kwaye isahlulo somenzi siphelelwa ukuba siphinde sibe khona; Iyakhupha emagumbini omhlaba ngokuzenzeka ukuzityhutyha de ibe ikhulile, kwaye emva koko ibuye ivele emhlabeni. Icandelo lesibini xa i-parter doer ichithe ukuKhanya ngokuziqhelisa ngokwabo, ukunywa, iziphuzo kunye neziyobisi, kwaye ekugqibeleni kuba yinto ephilileyo. Emva koko loo nxalenye yomenzi uya ekamelweni emhlabeni. Kulapho uhlala khona ide uvumeleke ukuba uqhubeke nokuhlala kwakhona. Kwiimeko zombini, umhlala-phantsi ngowokukhuseleko kwabanye, kunye neyakhe.
Uthando: Ngumntu oQaphelayo kwihlabathi; kumenzi kumntu, kungumnqweno-kunye nomnqweno kunye kunye nokunye kunye nokuzifunela kunye nokuziva kwakho kunye nanjengomnye.
Uthando kuMenzi: yimeko yomanyano olinganiselayo kunye nokusebenzisana phakathi kokuvakalelwa-kunye nomnqweno, apho umntu evakalelwa kwaye enqwenela ukuba khona kwaye uqobo kwaye unjalo.
Ukukhohlisa nokunyaniseka: Umnqweno wokungathembekanga nokuqamba amanga yizinto ezimbi ezikhethekileyo; bahamba kunye. Lowo ukhetha ukungathembeki nokuqamba amanga ngumntu emva kokufumana amaxesha amade ebomini ahlulekile ukubona izinto njengabo
kwaye usichaze ngokucacileyo oko akufumene. Uye wabona ngokukhethekileyo iingcambu ezimbi kunazo zonke zabantu kwaye uziqinisekisile ukuba bonke abantu bangamanga kwaye bangathembekanga, kwaye abo bahlala bakholelwa ukuba bathembekile kwaye banyanisekile bodwa banobuchule bokufihla ukunyaniseka kwabo nokufihla ubuxoki babo. Esi sigqibo sivelisa inzondo nokuziphindezela; kwaye umntu uba lutshaba ebantwini, njengelona gwetyana okanye njengengqiqo
kunye nenjongo yokuzicwangcisa abanye ngenzuzo. Nangona kunjalo isiqalekiso kwihlabathi ukuba umntu abe, iingcamango zakhe njengexesha elizayo liza kumtyhila kwihlabathi nakuye. Ngexesha elizayo uya kufunda ukuba ukunyaniseka nokunyaniseka kwiingcamango nezenzo kubonisa indlela yoLwazi loLwazi.
Malice:ukunyaniseka ngumoya wokuthanda okubi kunye nenjongo engendawo yokulimaza, ukubangela ukubandezeleka; lutshaba lokwenza okuhle nokuthanda.
Imbeko: Imikhwa emihle ifumaneka kumlingani womenzi; ziphuhlisiwe, zingabhaliswa. Ipolish ephezulu ayiyi kufihla umgangatho wezinto ezilungileyo okanye ezimbi, nokuba yeyiphi na into enokuba ngumenzi wendawo ebomini.
Umxholo: Imbonakalo ibonakaliswe njengeeyunithi ezingenangqiqo njengendalo, kwaye, yintoni inkqubela phambili yokuba yiyunithi ezinengqiqo njenge-Triune Selves.
I ntsi ngiselo: Injongo kwingcamango echazwe.
Phakathi, A: ibinzana eliqhelekileyo elisithetha isitya, ithetha, okanye ukuthunyelwa. Lapha lisetyenziswe ukuchaza umntu onomzimba ogqithiseleyo okanye ongowesibhakabhaka ogqithiselayo aze aqhube umoya okhangele naluphi na uhlobo lwezinto ezininzi zezilwanyana, iziqwenga, okanye abazulazisayo emva kokufa kunye nokufuna ukuphila. Umphakathi ke usebenza njengendlela yokunxibelelana phakathi komntu kunye nomenzi kwimibutho yabantu.
Imemori: ukuveliswa kombono ngolu hlobo apho kuthathwa ingqalelo. Kukho iintlobo ezimbini zeememori: imemori-imemori, kunye nenkumbulo yomenzi. Ukukhumbula imemori kukho ezine iiklasi: inkumbulo yokubona, inkumbulo yokuva, inkumbulo yokukhumbula, kunye nenkohlakalo yokukhumbula. Iqela ngalinye lezitho zengqondo ezine lilungiselelwe ukuthatha izinto ezibonakalayo kumbumbi walo ummeli, kunye nokuthumela okubonakalayo kulokho okubonakalayo kubhalwe khona, kwaye ziphinde zenziwe kwakhona; kumntu, yimoya yokuphefumula. Ukuveliswa kombono kuyimemori.
Imemori, uMenzi-: ukuveliswa kwamazwe omvakalelo-nomnqweno walo mzimba, okanye nakweyiphi na imizimba yangaphambili ehlala kulo mhlaba. Umenzi akayiboni okanye ayive okanye ayinandi okanye iphunga. Kodwa izinto, izandi, ukunqwenela, kunye nokuvumba okuphefumlelweyo kwindlela yokuphefumula eyenzeka ngayo xa unomvakalelo-nomnqweno womenzi kwaye uvelise intlungu okanye ujabule, uvuyo okanye usizi, ithemba okanye ukwesaba, ukuxhamla okanye ukutyhafa. Ezi mvakalelo ziyizikhumbuzo zentetho yokubhengeza okanye ukudandatheka okuye kwenzeka. Kukho amakhonkco amane okukhumbuza: i-psycho-physically, yindlela ezenza ngayo iimvakalelo-kunye nomnqweno kwiziganeko zomzimba zobomi; izikhumbuzo zengqondo, eziziphendulela
ukuziva-kunye nomnqweno kwiindawo kunye nezinto, ngenxa okanye ngokuchasene nazo, ngenxa yeemeko ezifanayo kumava yangaphambili; iikhumbuzo zengqondo, ezikhathazayo imibuzo efanelekileyo okanye engalunganga okanye isisombululo seengxaki zengqondo okanye
ukulungiswa kweemeko ezingxamisekileyo okanye ezingalindelekanga zobomi; kunye nememori yengqondo ye-noetic, ejongene nolwazi lobunikazi, xa ixesha linyamalalala ngomzuzwana kwaye umenzi uyazi ukuba uyedwa ngaphandle
kungakhathaliseki bonke ubomi kunye nokufa okuye kwadlulayo.
Imemori, i-Sense-: iquka (a) izitho zeso, njengekhamera apho kufuneka kuthathwe umfanekiso; (b) umboniso wamehlo apho ukubonwa okucacileyo kunye nokugxila kukwenziwa; (c) i-negative okanye iplati apho umfanekiso uya kuhlonywa khona kwaye ukuvela kuso umfanekiso kwaye (d) lowo ubeka phambili kwaye uthatha umfanekiso. Iisethi zamalungu omzimba zixhobo zokusebenza ezisetyenziswayo ekuboneni. Ukubonwa yiyunithi yesimo sokuqala esisetyenziselwa ukudlulisela imifanekiso okanye umfanekiso ojoliswe kwifom yefomu yokuphefumla. Umenzi ungumbonisi obona umfanekiso ujolise kwifom-fomu yayo. Ukuveliswa okanye imemori yaloo mfanekiso ihamba ngokuzenzekelayo kwaye yenziwe ngokutsha ngokubambisana nenjongo yokukhunjulwa. Naliphi na enye inkqubo yengqondo iphazamise okanye ikhuphe ukuveliswa okulula okanye imemori. Njengomqondo wokubona kunye nezitho zayo zokubona, ngoko kukuva kunye nokutya kunye nokuvumba, kunye nokuzaliswa kwazo njengezikhumbuzo. Ukubona imemori ebonakalayo okanye ebonakalayo; ukuva, imemori yokucwaninga okanye yeefowuni; ukunambitha, imemori engummangaliso; kunye nokunuka, imemori ecacileyo.
Isimo sengqondo kunye nesimo sengqondo:Isimo sengqondo somntu sinombono wobomi; kunjengomhlaba ngenjongo epheleleyo yokuba okanye ukwenza okanye ukuba nento ethile. Ikhefu yakhe yengqondo yindlela ethile kunye neendlela zokuba nokuba okanye ukwenza okanye nantoni na into ethile, echanekileyo kwaye iveliswe ngokucinga.
Ukusebenza kwengqondo: yindlela okanye indlela okanye ukusebenza ngayo nayiphi na enye yeengqondo ezintathu ezisetyenziswe ngumenzi-ngomzimba.
I-Metempsychosis: lixesha emva kokuba umenzi eshiye iHolo loMgwebo kunye nomoya wokuphefumula, kwaye ukhona kwaye adlule kwinkqubo yokuhlanjululwa, apho ihlukanisa khona iminqweno yayo ebangela ukubandezeleka, ukusuka kwiminqweno engcono eyenzayo. I-Metempsychosis iphelile xa oku kwenziwa.
Ingqondo: kukusebenza kwengqondo. Kukho iingqondo ezisixhenxe, oko kukuthi, iintlobo ezisixhenxe zokucinga ngokuzimela kweThathu, kunye noKhanya koBulumko, -noko bafana. Zonke iintlobo ezisixhenxe kufuneka zenze ngokuvumelana nomgaqo omnye, oko kukuthi, ukubamba ukukhanya ngokukhawuleza kwimiba yokucinga. Zizo: ingqondo ye-I-ness kunye nengqondo yokuzimela komazi; ingqondo yokufaneleka kunye nengqondo yesizathu somcinga; ingqondo yengqondo kunye nengqondo yomnqweno womenzi; kunye nengqondo yomzimba esetyenziswe ngumenzi wendalo, kunye nemvelo kuphela.
Igama elithi "ingqondo" lilapha lisetyenziswe njengalo msebenzi okanye kwinkqubo okanye into ekuye kwenziwa ngayo. Ixesha eliqhelekileyo apha kwiingqondo ezisixhenxe, kwaye ngasinye sesisixhenxe sinesizathu saloo mgca wecinga loMntu weZiThathu. Ukucinga kukubambelela ngokukhawuleza koLwazi lokuChengisisa malunga nokucinga. Ingqondo ye-I-ness kwaye ingqondo yokuzimela iyasetyenziswa ngamacala amabini owaziyo kwiZiqu zokuziThumela. Ingqondo ngokuchanekileyo kunye nengqondo yezizathu zisetyenziswe ngumcingisi woMntu oZiThathu. Ingqondo-mvakalelo kunye nomqondo-nomnqweno womzimba kufuneka isetyenziswe ngumenzi: ezimbini zokuqala ukuhlula umvakalelo kunye nomnqweno emzimbeni kunye nemvelo kunye nokuba ne-union inokulinganisela; Ingqondo yomzimba kufuneka isetyenziswe ngeengqondo ezine, ngenxa yomzimba kunye nolwalamano lwalo kunye nemvelo.
Ingqondo, Ibhunga-: Injongo yangempela yengqondo yomzimba kukusetyenziswa komvakalelo-kunye nomnqweno, ukunyamekela nokulawula umzimba, kunye nomzimba ukukhokela nokulawula iihlabathi zezine ngeendlela ezine kunye nezitho zawo umzimba. Ingqondo yomzimba ingacinga kuphela ngeengqondo kwaye ngokwemigqaliselo ikhutshelwe kwiintlobo kunye nemeko enomdla. Esikhundleni sokulawulwa, ingqondo yomzimba ilawula ukuziva-kunye nomnqweno ukuze bangakwazi ukwahlula emzimbeni, kwaye ingqondo yomzimba ilawula ukucinga kwabo ukuba baphoqelelwe ukuba bacinge ngokwemigaqo yesimo endaweni imiqathango efanelwe ukuziva-kunye nomnqweno.
Ingqondo, Ukuvakalelwa-: yiloo nto inokucinga ngayo, ngokwemisebenzi yayo emine. Oku kukuqonda, ukucinga, ukuhambelana, kunye nokusebenza. Kodwa esikhundleni sokusebenzisa ezi zinto ukuba zikhululwe ngokwabo ekugqilazweni kwendalo, zilawulwa ngqondweni wengqondo ngokwezimo ezine: ukubona, ukuva, ukunambitha, nokuvumba.
Ingqondo, Isifiso-: iminqweno ifanele ukuyisebenzise ekuqeqesheni nasekulawuleni umuzwa kunye nayo; ukwahlula njengomnqweno ovela emzimbeni apho; kwaye, ukuzisa umanyano ngokwawo ngokwawo; , kunoko, ivumelekile ukuba ilawulwe phantsi kwaye ilawulwe yingqondo yomzimba kwinkonzo kwiintliziyo kunye nezinto zendalo.
Ukuziphatha: zizimisele ukuya kwinqanaba lokuba iimvakalelo kunye neminqweno ikhokelwa lizwi elingenanto elingenanto engenanto entliziyweni malunga noko akufanele ukwenze, kunye nesigqibo esicacileyo sokuqiqa, malunga noko ukwenza. Emva koko, nangona kukho ukuphambuka kweengqondo, ukuziphatha komntu kuya kuba ngokuthe tye kwaye kulungile, ngokubhekiselele kuye kunye nokuqwalasela abanye. Ukuziphatha komntu kuya kuba yimvelaphi yesimo sengqondo somntu.
Mysticism: inkolelo okanye umzamo wokudibanisana noThixo, ngokucamngca okanye ngokufumana ukufuphi, ubukho okanye ukuthetha noThixo. Ama-Mystics aphuma kuzo zonke iintlanga kunye nenkolo, kwaye abanye abanalo inkolo ekhethekileyo. Izindlela okanye iinkqubo zabo ziyahluka ekuthuleni ekuthuleni nasekusebenziseni ubudlova nokuzivocavoca kunye nokuzibandakanya komntu ngamnye kumboniso wobuninzi. Ama-Mystics bahlala benyanisekile kwiinjongo zabo kunye neenkolelo zabo kwaye bazimisele ngokuthandaza kwabo. Baya kuvuka ngokukhawuleza kwiindawo eziphakamileyo, baze badibanise ekudakaleni; amava abo angaba mfutshane okanye athathe ixesha elide. Kodwa ezi ziva nje iimvakalelo neminqweno. Azizona iziphumo zokucinga okucacileyo; abanalo ulwazi. Oko babecinga ukuba nolwazi ngoThixo okanye ukufuphi kuThixo kuya kuhlala kuhlangene nezinto ezibonakalayo, ukuva, ukunambitha okanye ukuvumba, ezona zintliziyo-kungekhona zoMoya, okanye zoBulumko.
Uhlobo: umatshini oqulunqwe ubuncinane beeyunithi ezingaqondanga; iiyunithi eziziwayo njengemisebenzi yazo kuphela.
Kubalulekile: isiphephelo, isenzo esinyanzelayo, ngokuqhelekileyo sisisiseko, apho kungekho nto yokuphunyuka kuyo oothixo okanye amadoda.
Noetic: Oko kokwazi okanye okuhlobene nolwazi.
Inani: Enye, yonke, njengesangqa, apho zonke iinombolo zifakiwe.
Amanani: imigaqo yokuba, ngokuqhubeka kunye nokuhambelana nobunye, Ubunye.
Nye: iyunithi, umanyano okanye yonke, imvelaphi kunye nokufakwa kwazo zonke iinombolo njengamalungu ayo, ngokwandiswa okanye ekugqityweni.
Ubunye: Ulwalamano olufanelekileyo kuyo yonke imigaqo kunye nendawo
umbono: isigwebo sichazwa emva kokuqwalaselwa ngokufanelekileyo kwayo yonke imiba yeso sifundo.
Ithuba: lixesha elifanelekileyo okanye elifanelekileyo okanye imeko okanye indawo yokuthatha isenzo ukufezekisa nayiphi na injongo kwaye ingakumbi ixhala malunga neemfuno okanye ukufunwa kwabantu.
nantlungu: isethi yeengcinga eziphazamisayo njengesohlwayo sokucinga okungalunganga okanye ukwenza, kwaye isaziso esinikwe kumenzi wokuziva-kunye nomnqweno wokususa imbangela yayo.
Ukunyuka: ukuthukuthela kweemvakalelo kunye neminqweno malunga nezinto okanye izifundo ze -ssenses.
Umonde: ukuzola kunye nokunyamekela ngokukhawuleza ekufezekeni komnqweno okanye injongo.
Umzimba oPheleleyo: likarhulumente okanye imeko ephezulu, epheleleyo; okungekho nto ingalahleka, okanye nayiphi na into engayongezwayo. Loo mzimba ongenasiphelo wobuNtu boBuThathu kuMmandla we
Ubuntu: ngumzimba womzimba womzimba, i-mask, ngaphakathi kunye nalapho umenzi ongenakonakalisa umnqweno nomvakalelo ucinga kwaye uthetha kwaye wenza.
Ukunyaniseka: isimo sengqondo esiveliswa kukubona okanye inkolelo yokuba iminqweno yabantu ayinakuzaneliseka; ukuba abantu kunye nehlabathi bangaphandle; kwaye, akukho nto enokuyenza malunga nayo.
Cwangciso: yinto ebonisa indlela okanye iindlela ekufezekiswe ngayo injongo.
Ukuzonwabisa: ukuhamba kweemvakalelo ngokuvumelana nemvakalelo, kunye nokuvuyisa ukuziva-kunye nomnqweno.
Inkondlo: ubugcisa bokumisela intsingiselo yengcinga kunye neshyhyithwa kwiifomu okanye amagama omusa okanye amandla.
Point, A: yinto engenasici kodwa apho ububanzi buza khona. Ingongoma kukuqala kwayo yonke into. Ukungabonakaliyo kwaye kubonakaliswe ukwahlula ngephuzu. Ukungabonakaliswa kubonakaliswe ngephuzu. Ukubonakaliswa kubuya ekungabonakaliswa kwinqanaba.
Ukuxhaswa: yimeko yokulinganisela, yokulingana kwengqondo kunye nokulawula umzimba, apho umntu acinga nokuziva kwaye akwenza ngokukhululeka, engaphazamiseki ziziganeko okanye iimeko, okanye ngeengcinga okanye izenzo zabanye.
Impahla: ziyimfuneko ezifana nokutya, izambatho, indawo yokuhlala, kunye neendlela zokugcina ubuntu bomntu kwindawo yayo ebomini; ngaphezu kwezi zinto kunye nazo zonke ezinye iimeko ziimigibe, iinkathalo kunye neentambo.
Amandla, Unonophelo: umnqweno, ozisa utshintsho ngokwawo, okanye obangela ukuba utshintsho kwezinye izinto.
Pranayama: ligama lesiSanskrit eliphantsi kokutolika ezininzi. Ukusetyenziswa ngokuqhelekileyo kuthetha ukulawulwa okanye umgaqo wokuphefumla ngemisebenzi eqingqiweyo yokuphalala, ukumiswa, ukukhulelwa, ukumiswa, nokufakelwa kwakhona kwinani elithile leembalo okanye ixesha elithile. Kwi-Yoga Sutras yasePatanjali, i-pranayama inikwe okwesine kumanyathelo asibhozo okanye izigaba ze-yoga. Injongo ye-pranayama kuthiwa yindlela yokulawula i-prana, okanye ukulawula kwengqondo ekugxininiseni. Nangona kunjalo, umkhuba we-pranayama udibanisa kwaye unqobe injongo, kuba ukucinga kugxininiswe okanye ngokuphefumla okanye kwi-prana, kunye nokuyeka ukuphefumla. Ukucinga nokuyeka ukuphefumula kuvimbela ukucinga kwangempela. Ukukhanya Okuqaphelayo ekusebenziseni ukucinga-ukuzazisa umntu ocinga ngayo ingcamango yokucinga kwakhe-kuthintela ukuba kungagqithisi ngokuyeka ukuphefumula komzimba kunye nokuhamba rhoqo. Ukukhanya kokuKhathalela kungena kuphela kwimiba emibini yokungathathi hlangothi phakathi kokuqhaqhaqhaqhaqha kunye nokuqhaqhaqhaqhaqha kunye nokuqhaqhaqhaqhaqha kunye nokuhlaselwa. Ukuyeka ukugcina ukuKhanya. Ngenxa yoko, akukho ukuKhanya; akukho ngcinga; akukho yoga yangempela okanye umanyano; akukho nolwazi lokwenene.
Kukhethwa: Ubumnandi bomntu othile, indawo okanye into ngokuzivakalela nangomnqweno, ngaphandle kokuqwalasela ilungelo okanye isizathu; inqanda umbono weengqondo.
Ubandlululo: ugweba umntu, indawo okanye into apho unomvakalelo-kunye nomnqweno uyaphikisana, ngaphandle kokuqwalasela, okanye kungakhathaliseki ukuba yiyiphi, ilungelo okanye isizathu. Ubandlululo luvimbela umgwebo ochanekileyo.
Umgaqo: yinkqubo apho yonke imigaqo ikhona kwaye iyakwazi ukwahlukana nayo.
Umgaqo, A: yinto ebalulekileyo kwinto ebekuyiyo, oko yaba yiyo, kwaye ngokubhekiselele kuyo ukuba ingaziwa yiphi na indawo apho ikhona khona.
Inkqubela: ukuqhubeka nokwandisa kwisakhono sokwazi, kunye nokukwazi ukusebenzisa kakuhle loo nto eyaziwayo.
Sohlwaya: sisihlwayo sokwenza okungalunganga. Akuhlose ukuba kubangele ukuhlushwa kunye nokubandezeleka kumntu ojeziswe; Kuhloselwe ukufundisa umntu ohlwaya ukuba akakwazi ukwenza okungahambi kakuhle ngaphandle kokubandezeleka, kungekudala okanye emva kwexesha, imiphumo yokungahambi kakuhle.
Injongo: isisusa esikukhokelayo kumgudu njengento esheshayo, ukuba ngubani ozama, okanye oza kuthiwa uyaziwa; yindlela eyaziwayo yamandla, injongo ngamagama okanye kwisenzo, ukufezekiswa kwengcamango nomzamo, ukuphela kokufikelela.
umgangatho: iqondo lokugqwesa eliphuhliswe kwimeko kunye nomsebenzi wento.
Yinyaniso, A: iyunithi njengoko kunjalo, engabandakanyekanga, into ngokwayo; into eyaziwayo okanye eyaziwayo, kwimeko okanye kwinqanaba apho, ngaphandle kokuqwalasela okanye ukuhambelana nantoni na ngaphandle kwayo.
Eyinyani, isihlobo: ukuqhubeka kwezinto okanye izinto kunye nolwalamano lwabo, kwimeko kunye nakwi-ndege apho zibonwa khona.
Eyona nyaniso, ekugqibeleni: Ukuqonda, ukungatshintshi kunye nokuphelela; Ubuninzi beNkathazo kunye kunye nendawo nganye yendalo kunye neCandelo leZiThathu kunye noBulumko kwixesha kunye nendawo kwi-Eternal, ngexesha lokuqhubeka kwenkqubela yayo rhoqo kwii-degrees eziphakamileyo ekuqapheleni kude kube nye kunye noNcedo .
Indawo yokuhlala isigxina, I: ihamba phambili kwi-phantasmagoria yale hlabathi lehlabathi lokuzalwa nokufa, njengokuba ilanga liphuma emoyeni esiphefumulayo. Kodwa umntu ofayo ubona kwaye uyayiqonda iNdawo ngaphandle kokubona okanye ukuqonda ilanga. Isizathu kukuba iinjongo kunye nemibono ayinakulinganisela, kwaye ayinakulungelelaniswa nezinto izinto ezingaxhomekeke kuyo ixesha kunye nokufa. Kodwa uMbuso woBugxininisa ubambelela kwaye ulondoloze ihlabathi lomntu ekubhubhiseni, njengokuba ilanga liphila kunye nokukhula kwezinto eziphilayo. Umenzi owaziyo emzimbeni uya kuqonda kwaye aqonde uMmandla wokuQiniseka njengoko eqonda kwaye azihlukanisa nomzimba oguqukayo apho afuna khona kwaye azive ecinga.
Isizathu: ngumhlalutyi, umlawuli kunye nejaji; umlawuli wobulungisa njengezenzo zolwazi ngokomthetho wokufaneleka. Impendulo yemibuzo kunye neengxaki, isiqalo kunye nokuphela kokucinga, kunye nesikhokelo solwazi.
Ukuphila kwakhona: umgcini wesahlulo eshiya ezinye iindawo ngokwawo, kwi-istence, ukuba uphinde ube khona kude, ngokwasemvelo, xa umzimba womntu wesilwanyana ulungiselelwe kwaye ulungele ukuba ungene kwaye uthathe indawo yokuhlala kuyo loo mzimba. Umzimba wezilwanyana uyilungele ngokuqeqesha ukuba usebenzise intsingiselo, ukuhamba, nokuphinda amagama aqeqeshelwe ukuwasebenzisa. Oko kwenzayo, njengengqungquthela, ngelixa isisilwanyana. Iba ngumntu ngokukhawuleza nje ngokuba ingqiqo, njengoko kuboniswa yimibandela ebuzayo, nokuba yintoni eyiqondayo.
Ukuhlaziywa kwakhona: ukuguqulwa kwesizukulwana, ukuzaliswa komzimba. Oku kuthetha ukuthi iintsholongwane zentsholongwane emzimbeni zisetyenziselwa ukuzisa omnye umzimba kwihlabathi kodwa ukutshintsha nokunika umgangatho omtsha wokuphakama komzimba. Lo ngowokuvuselela umzimba kumntu wesilisa okanye umfazi ongaphelelanga kumzimba opheleleyo kwaye ungagqibekanga wesini, ofezekanga ngokungabonakali iingcamango zesini okanye ukucinga ngezenzo zesondo; kunye nesimo sengqondo esiqhubekayo sokuvuselela umzimba wakho kwiimeko zangaphambili ezigqibeleleyo ezivela kuyo.
Ulwalamano: imvelaphi kunye nokulandelelana ngokubambisana ngokugqithisileyo apho zonke iiyunithi zendalo kunye neeyunithi ezinengqiqo kunye neentelligences zihambelana kwi-Conscious Sameness.
Inkolo: ngumtya womnye okanye zonke ezine zezinto zendalo, njengomlilo okanye umoya okanye amanzi okanye umhlaba, ngeengqondo zomzimba zokubona, ukuva, ukunambitha, okanye ukuvumba, obamba okanye obamba umenzi owaziyo emzimbeni emva uhlobo. Oku kwenziwa kwiingcamango kunye nezenzo zonqulo kunye neminikelo yokutshiswa kunye neengoma kunye neengcafa okanye ukucwiliswa emanzini kunye nesiqhumiso kumnye okanye oothixo abaninzi beempawu zomlilo, umoya, amanzi okanye umhlaba.
U xanduva: kuxhomekeke kwisakhono sokwazi okulungileyo kokungalunganga; kukuxhomekeka kunye nokwethenjwa okunokufakwa kwisinye ukwenza konke akwenzileyo nakwimanje, okanye ekuthandeni kwakhe, ukuba nguye ojongene naye. Uxanduva luquka ukunyaniseka nokunyaniseka, ukuhlonipha nokuthembeka kunye nezinye iimpawu ezinokuba ngumntu onamandla kwaye ongenesibindi, ogama lakhe linokwethenjelwa ngakumbi kunesivumelwano somthetho.
Uvuko: inentsingiselo emibini. Iyokuqala ukuhlanganisana kweengqondo ezine kunye nabaqambi bomzimba wobomi obudlulileyo, ezazisasazwa kwimvelo emva kokufa kwayo, kunye nokwakhiwa kwimoya yokuphefumula yomzimba omzimba wokukhonza njengendawo yokuhlala umenzi xa ebuyela emhlabeni emhlabeni. Inqaku lesibini nelona lithetha ukuba umenzi kumntu okanye kumfazi wesibini uvuselela umzimba wesini esivela kumntu ongaphelele okanye umzimba wesifazana onguwo, emzimbeni apho izinto ezibalulekileyo zezo zesini zidibaniswa kumzimba womzimba omnye kwaye zivuselelwe , kwisimo sayo sangaphambili kunye nesimo sokungafi sokufezeka.
Bu yisela: ngumnqweno wokulamba ukulimaza komnye ngokuphindiselela kunye nesohlwayiso sokwenene okanye ukucinga okuphosakeleyo, kunye nokwanelisa umnqweno wempindezelo.
Isiqhelo: impawu kunye nengqiqo yengcamango echazwe kumlinganiselo okanye ukunyakaza ngesandi okanye kwifom, okanye ngempawu ebhaliweyo okanye amagama.
Kunene: sisisombululo solwazi olwaziyo, njengendlela yokulawula isenzo esingaphakathi.
Ukufaneleka: imilinganiselo yokucinga kunye nesenzo, njengoko umthetho ochazwe kunye nomgaqo wokuziphatha, kumenzi-nomnqweno emzimbeni. Itholakala entliziyweni.
Usizi: kukudandatheka kwindlela yokucinga.
Ukuzimela, i-Higher: ngumnqweno okanye umnqweno owaziwayo njengomntu ophezulu, ngasentla, ogqwesileyo kwizinto ezinokwenene, ezinokwenyama, ezingenanto kwaye ezincinci zobomi bemihla ngemihla. Umntu ophakamileyo akayena ohlukeneyo
umnqweno kumntu, kodwa umntu ucinga ngokuba ngumntu ophakamileyo kuba, njengokuba umnqweno, unxulumene ngokungafani nomntu owaziwayo kwiZiqu zakhe zoMntu, ngoko ke umthombo wokwenene womnqweno woMntu oPhezulu.
Ukuzihlaziya: lukarhulumente apho umenzi ebeka khona ngokuvumela ukukhanga okanye ukugxeka, ukukhetha okanye ukubandlulula, kuthintela ingcinga.
Ukuzimela: Ukwazi ngokwalo nje ngokuba ngumazi woBuZiqu beZiqu.
Ukuqonda: Uqhagamshelwano kunye nempembelelo yeeyunithi zendalo ngokuvakalelwa, ngeengqondo kunye neentliziyo zomzimba, ezibangele ukuvakalelwa, imvakalelo, umnqweno. Ingqiqo ayiyiyo imvakalelo, imvakalelo, okanye umnqweno. Ngaphandle komzimba, ukuvakalelwa akunakuvakalelwa. Nangona uvakalelwa emzimbeni kukho umlambo oqhubekayo weeyunithi zendalo eziza kwiintliziyo kunye nokudlula emzimbeni njengento ebonakalayo kwivakalelo, ngokufana nefuthe leyinki ephepheni. Njengoko ingenayo inki kunye nephepha kwakungekho ncwadana eprintiweyo, ngoko ke ngaphandle kwemifudlana yeeyunithi zendalo kunye nokuziva kwakungekho nto inokuvakalelwa. Zonke iintlungu kunye nemihlali kunye nemvakalelo, yonke imihlali kunye nethemba kunye nokwesaba, ukudabuka, ubumnyama kunye nokuphelelwa lithemba yizizathu, iziphumo zokubonakalisa ezenziwe ngoluvo, ngokuqhagamshelana neyunithi yendalo. Njalo ke iimpendulo ngomnqweno wokubonakalisa okwenziwe ngoluvo, njengentlungu, ukukrakra, ukukrakra, i-avarice, ukuphanga, ukukhanga, okanye ukuthanda. Kodwa umnqweno ngokwawo ngaphandle komzimba ayikho enye yalezi, akukho ngaphezu kokuvakalelwa ngumbono owenziwe kuwo ngokuqhagamshelana nawo kwiiyunithi zendalo.
Iimpawu zeBhunga: bangabameli bezendalo kwintendelezo yomntu; abameli bezinto ezine ezinkulu zomlilo, umoya, amanzi kunye nomhlaba, ezizimeleyo njengezibona, ukuva, ukunambitha, kunye nokuvumba komzimba womntu.
Inzwa: uluvo olubonakaliswe ngumvakalelo nokucinga malunga nomntu, indawo okanye into.
Ukukhathazeka: ukuthotywa kwengqondo ngamazwi enkohliso.
Zesondo: zezi zixhobo zengcamango yomnqweno kunye nomvakalelo obangela ukuba imizimba yamadoda neyabhinqa.
Ngokwesini: yimeko yokuxhalaba-nomnqweno emzimbeni womntu ofumana iifom kunye nezigaba zemvelo-utywala okanye utywala.
Ukubona: iyunithi yomlilo, esebenza njenge-ambassador yequmrhu lomlilo kwindalo yomntu. Ukubukeka yindlela ekuqhutyelwa kuyo umbane wendalo kunye nenkqubo yokuvelisa emzimbeni kwaye usabele njani. Ukubonwa yileyunithi yendalo enxulumene kwaye iququzelele iinkqubo zenkqubo yokuvelisa kunye nemisebenzi njengento ebonwa ngolu hlobo olufanelekileyo lwezitho zalo.
Ukuthula: Ulwazi lokuphumla: ukuqonda ukuzinza ngaphandle kokuhamba okanye isandi.
Isono: ukucinga nokukwenza oko owaziyo ukuba akuphosakeleyo, ngokuchasene nokuchanekileyo, into eyaziwayo ukuba ilungile. Naluphi na ukuhamba kwizinto owaziyo ukuba zilungile, sisono. Kukho izono ezithintela wena, ngokumelene nabanye, kunye nendalo. Izigwebo zesono zibuhlungu, izifo, ukuhlupheka, kwaye ekugqibeleni, ukufa. Isono sokuqala ingcamango, ilandelwa isenzo sesondo.
U buchule: iqondo lobugcisa kwintetho yento ecinga ngayo kunye neminqweno kwaye uzive.
Ukulala: ukuvumela ukuhamba ngomvakalelo-kunye nomnqweno womenzi, inkqubo yesiphako kunye neengqondo ezine zomzimba, kwaye uhlala phantsi ngokwawo ekuphupheni okungenangqondo. Ukuyeka ukuhamba kubangelwa ukunyuka kwemisebenzi yomzimba ngenxa yokufunwa kwayo yokuphumla, ukulungiselela ukulungiswa kwendalo kunye nokumisela umzimba ngexesha lokungabikho komenzi. Emva koko umenzi akakwazi ukuthintana nendalo kwaye akakwazi ukubona, ukuva, ukuthintela okanye ukuvumba.
Ukuhoba: iyunithi yomhlaba womhlaba, ummeli womhlaba womzimba emzimbeni womntu. Ukuthunga ngumhlaba apho umgangatho womhlaba wemvelo kunye nenkqubo yokugaya umzimba emzimbeni ukudibana kunye nokudibanisa. Ukubukeka kuthatha ukuva, ukuphulaphula kwindlela yokuvalelwa kwintetho, ukunambitheka kwento ephilileyo, ukuvumba kumzimba. Umbono ngumlilo, uva i-airy, unambitha amanzi, uphefumle umhlaba oqinileyo. Ukuvumba kuyisiseko apho ezinye iintlobo zintathu zisebenza.
Somnambulism: uhambahamba ngexesha lokulala ngokukhulu, ukwenza izinto ngumntu olalayo njengokungathi uphapheme, kwaye, kwiimeko ezithile, ukwenza izinto ezenziwayo ukuba umntu ongasayi kuzama xa evukile. I-Somnambulism yiphumo lokucinga ngaphandle kokuvuka; kwaye ukucinga okunjalo kungabonakali kakuhle kwifomu yokuphefumla. Emva kwexesha elithile ebuthongweni obunzulu obuliphupha kwiimeko zokuvusa zenziwa ngokuzenzekelayo ngefom-fom, ngokutsho kwesicwangciso esibhaliweyo kuso somnambulist.
Somnambulist, A: uhamba ngokulala, umntu ocingayo kunye nomzimba wesimo somoya kunye nefom-fomu ifuthekile kwaye ixhomekeke kwisiphakamiso; Lowo ucinga oko angathanda ukwenza kodwa ukwesaba ukwenza. Izinto azicingayo ngemini-ephupha kwindawo yokuvuka kamva ezenziwe ngomoya wakhe ngexesha lokulala. Kodwa, ekuvukeni, akaqapheli oko umzimba wakhe wenziwe ukwenzela ulele.
Umphefumlo: Into engapheliyo yenkolo kunye nefilosofi, ngamanye amaxesha kuthiwa ayifi kwaye ngamanye amaxesha kuthiwa iphantsi kokufa, okuvela kuyo kunye neendawo eziza kubakho, kodwa oko kuye kwahlala kukuncedisa ukuba yinxalenye okanye inxulumene nomntu umzimba. Leyo ifom okanye isalathisi sokuphefumula komzimba wonke womzimba; Icala layo elisebenzayo ngumoya.
Isikhundla: yinto ebonakalayo, engazange ibonwe kwaye ayikho nto, yinto imvelaphi kunye nomthombo wazo zonke izinto ezibonakalayo. Akukho mida, iinxalenye, zichaza okanye ubukhulu. Kuyo yonke iyunithi yendalo, apho yonke imilinganiselo ikhoyo kwaye yonke imvelo iyahamba kwaye ikhona.
UMoya: lilungu elisebenzayo leyunithi yendalo eyenza amandla kwaye isebenze ngenye indlela okanye kwicala elincinci, elibizwa ngokuba yinto.
Umoya:. ngokuqhelekileyo kuthiwa yizinto zokomoya, uhambelana nemvelo yendalo okanye i-elemental yomlilo, umoya, amanzi kunye nomhlaba, ngamanye amaxesha kunye neendawo zomenzi womntu oshiye ebomini bomhlaba. Ezi ziqhelekileyo zibonwe okanye zixhunywe kunye nokusetyenziswa phakathi kwendawo. Ngomzimba, umzimba ogqamile okanye we-astral we-medium ungumbhalo okanye ifomu esetyenzisiweyo apho uhamba khona, kwaye iinqununu ezisuka kumzimba wenyama ophakathi kunye neengqungquthela zemizimba yabameli ziyakuthatyathwa ukuba zenzeke umzimba kunye nesisindo . Nangona ukungazi kunye nokukhohlisa okunxulumene nezinto ezifana nezinto ezibonakalayo, iinxalenye zomntu ofelayo zingabuya zize zivele ngokusetyenziswa kwezixhobo.
Into: iindawo ezingenammango, ngaphandle kweendawo, ezihambelanayo, ezifanayo, zonke eziqukethe "akukho nto," into engaziwayo, oko kukuthi, nangona kunjalo.
Impumelelo: kukufezekisa injongo.
Succubus: Ifomu engabonakaliyo yowesifazane ezama ukunyamekela okanye ukuba nobuhlobo bezesondo kunye nendoda ngexesha lokulala. Njenge-incubus, i-succubi ziintlobo ezimbini, kwaye ziyahluka ngendlela kunye nenjongo. I-Incubi kunye ne-succubi ayifanele ibekezelele ngaphantsi kweyiphi na into engqiqweni. Bangenza ingozi enkulu kwaye bangela ukuba abantu bahlupheke kakhulu.
Uphawu, A:into ebonakalayo ukumela isifundo esingabonakali esicinga ngayo, ngokwaso okanye ngokumalunga nesinye isihloko.
Ukutya: iyunithi yendalo yamanzi yendalo iqhubekela phambili kwinqanaba lokusebenza njengomphathiswa wendalo kumzimba womntu. Ukunqabana kuyisitishi apho indawo yamanzi yendalo kunye nesistim ejikelezayo emzimbeni isasazana. Ukunqongophala yileyunithi yendalo eyenza kwaye idibanise iiyunithi zomoya kunye nomhlaba kwiinqununu zayo zamanzi ukuba zilungiselele ukusasazwa kunye nokugaya kunye nezitho zalo ukuba zisebenze njengendlela yokunambitha.
Ucinga: Umlingani wangempela we-Triune Self uphakathi kowaziyo, kunye nomenzi walo emzimbeni womntu. Ucinga ngengqondo yokufaneleka kunye nengqondo yokuqiqa. Akukho nkxalabo okanye ukungathandabuzeki ekucingeni kwayo, akukho nto ingavumelani phakathi kokufaneleka nokuqiqa. Ayenzi iiphoso ekucingeni kwayo; kwaye oko kucinga ukuba kusebenza ngokukhawuleza.
Umenzi-ngaphakathi-mzimba u-spasmodic kwaye akaqinisekanga ekucingeni; ingqondo-kunye-nomnqweno-ingqondo ayisoloko ivumelana, kwaye ukucinga kwabo kulawulwa yingqondo yomzimba ecinga ngeengqondo kunye nezinto zengqondo. Kwaye, esikhundleni sokuKhanya okucacileyo, ukucinga kuyenzeka ngokuphindaphindiweyo kwintonga kunye nokuKhanya kuqhutywe kwintambo. Sekunjalo, impucuko ehlabathini yiphumo lokucinga kunye neengcamango ezenzileyo. Ngaba abanye babenzi emzimbeni womntu baqaphele ukuba bangabhubhi abayiyo, kwaye ukulawula endaweni yokulawulwa yiyo, iingqondo zabo zomzimba, banokuwubuyisela umhlaba ube ngumyezo ngeendlela zonke eziphezulu iparadesi.
Ucinga: ukugcinwa ngokukhawuleza koKhanya kweNkathazo ngaphakathi kwimeko yokucinga. Yinkqubo ye-1 ukukhethwa kwesifundo okanye ukuqulunqwa kombuzo; (2) ukuguqula ukuKhanya koMnqweno kuwo, okwenziwe ngokunika ingqalelo engacatshangwanga kuyo; (3) ngokubambelela ngokukhawuleza kwaye ugxininise ukuKhanya koNgcono kwimibuzo okanye umbuzo; kunye (4) ngokuzisa ukuKhanya ukugxila kwisifundo njengendawo. Xa ukuKhanya koNgcono kugxininise kwinqanaba, le ngongoma ivula ukuzaliseka kolwazi lonke lwesifundo esikhethiweyo okanye ukuphendula kumbuzo owenziwe. Ukucinga kuthinta izifundo ngokuxhomekeka kwabo kunye nokufaneleka kunye namandla
Ukucinga, Ukusebenza: Injongo yokucinga ngesifundo, kwaye umzamo wokubamba ukuKhanya koNcedo ngaphakathi kwesi sifundo, de kube loo nto iyaziwa, okanye kude kube lula ukuphazamiseka okanye ukuphendulwa kwesinye isihloko.
Ukucinga, Ukunyaniseka: ukucinga oku kwenziwa ngaphandle kwenjongo ecacileyo; iqalwa ngcamango engapheliyo okanye impembelelo yengqondo; umdlalo ongenzi lutho okanye ukuphupha kwamalanga okubandakanya omnye okanye zonke iingqondo ezintathu zomenzi kuMbane
njengoko kunokwenzeka kwimoya yengqondo.
Ukucinga Okungekho Ukudala Imicabango, Okokuthi, Ukuphela: Kutheni umntu ecinga? Ucinga ngenxa yokuba iingqondo zakhe zimphoqa ukuba acinge, malunga nezinto zeengqondo, ngabantu kunye neziganeko, kunye nendlela awaphendula ngayo. Yaye xa ecinga ukuba ufuna ukuba yinto ethile, ukwenza into, okanye ukufumana okanye ukufumana into ethile. Ufuna! Kwaye xa efuna ukuba azibandakanye kunye noKhanya ekucingeni, oko akufunayo; uye wadala ingcinga. Oko kuthetha ukuba ukuKhanya ekucingeni kwakhe kuphethwe ngumnqweno owenzayo, kumbandela kunye nenkambo yesenzo, okanye kwinto okanye into ayifunayo. Ngaloo mbono uye waqhawula waza wabopha ukuKhanya kunye naye. Yaye yindlela ephela yokukhulula ukuKhanya kwaye yena ngokwakhe kweso sibophelelo ukuba angabi nanye; oko kukuthi, kufuneka alinganise ingcamango ebophayo, ngokukhulula ukuKhanya kunye nomnqweno wakhe kwinto ufuna. Ukwenza oku, ngokuqhelekileyo kuthatha ubomi obungenammiselo, iminyaka, ukufunda, ukuqonda; ukuqonda ukuba akakwazi ukwenza ngokufanelekileyo kunye ngokukhululekile kunye nento ehlanganisiweyo kwaye eboshwe ngayo, njengoko enokuyenza ukuba wayengathanga, angaboshwa. Umnqweno wakho kuwe! Isenzo okanye into oyifunayo akunjalo. Ukuba unamathele uze ubophe kuyo ngcamango, awukwazi ukwenza ngokufanelekileyo kwaye ukuba awukhoyo kwaye ukhululekile ukwenza ngaphandle kokuncedisa. Ngako oko, ukucinga okungekho ukudala iingcamango kukhululekile ukucinga, kwaye ukungafuni, kubambe, kodwa kubambelele, ukuba, ukubamba, ngaphandle kokubophelwa kwisenzo, kwinto onayo, kwizinto ozenzayo ubambe. Oko kukuthi, ukucinga ngenkululeko. Emva koko unokucinga ngokucacileyo, ngokuKhanya okucacileyo, kunye namandla.
Ucinga, A: ngumntu ophilayo kwindalo, ekhulelwe kwaye enqabile entliziyweni ngovakalelo-kunye-nomnqweno ngoKhanya koNgcono, echazwe ngaphakathi kwaye ekhutshwe ebuchosheni, kwaye iya kukhangela njengento, into okanye isiganeko, ngokuphindaphindiweyo, kude kube u lungele. Umenzi womzali wengcamango nguye ojongene nazo zonke iziphumo ezigeleza kuyo de kube loo ngcamango ichanekileyo; oko kukuthi, ngamava avela kwi-exteriorizations, ukufunda kumava, umenzi
Ukhulula ukuKhanya kunye nomvakalelo-kunye nomnqweno kwizinto zendalo apho baboshwe khona, kwaye ke bafumana ulwazi.
Ukucinga, Ukulinganisa: Ukucinga kucacisa ukuKhanya ukusuka kwingcamango xa iimvakalelo-kunye nomnqweno zivumelana kunye kunye zombini zivumelane nokuzimela ngokuphathelele isenzo, into okanye isiganeko esiye sabonwa ngu-I-ness. Emva koko ukucinga kugxotha kwaye kubuyisela ukuKhanya kumoya wee-noetic kwaye ingcamango iyalinganisela, iphelile ukuba ikhona.
Ukucinga, i-Factory Balance in: yimiqondiso enoba isazela sisitampu njengengqineli yokungavumi ngexesha lokudalwa kwengcamango yentswelo nomnqweno. Kuzo zonke iinguqu kunye nokugqithiswa kwengcamango, umqondiso uhlala kude kube nokulinganisa kwaloo mbono. Umatshini kunye nengcamango iyalala xa ingcamango ifanelekileyo.
Ukucinga, Ukulawula: Umntu olawulayo ucinga ngexesha lokufa ngumcamango olawulayo wokuphila okulandelayo emhlabeni. Kungatshintshwa, kodwa ngelixa lilawula lichaphazela ukucinga kwakhe, lunceda ekukhetheni bakhe abahlobo kunye nezikhokelo
okanye ukummisela kwabanye abanengcamango efanayo. Ihlala ikhetha ngokukhetha ukhetho okanye ishishini okanye umsebenzi angayilandela ubomi. Nangona ihleli isigqibo sakhe sisichukumisa kwaye siyabanika
umbala kwimibono yakhe ebomini.
Iingcinga, Ukutyelela: Iingcamango zijikeleza; bafana nje ngokuba ngabazali babo; batyelelana kwiindawo zengqondo zabantu, ngenxa yeenjongo kunye nezinto ezidalwa kuzo, kwaye badibana nomoya wezinto ezifanayo zabantu abazenzayo. Iingcamango zezizathu eziphambili zentlanganiso kunye nombutho wabantu; ukufana kweengcamango zabo kubangela abantu ndawonye.
ixesha: ukutshintshwa kweeyunithi okanye ubuninzi beeyunithi ngokuhambelana kwabo. Kukho iintlobo ezininzi zexesha kwihlabathi kunye nakwiindawo ezahlukeneyo. Umzekelo: ubunzima beeyunithi eziqulunqa ilanga, inyanga, umhlaba, ukutshintsha kwiindawo eziphathanayo kunye nomnye, zilinganiswa njengelanga, inyanga, ixesha lehlabathi.
Ukufuduka: yinkqubo elandela ukukhonkxa kweentsholongwane zendoda kunye nabasetyhini ngohlobo lokuphefumula, umphefumlo womzimba wesikhathi esizayo, ekukhulelwe. Ukufuduka kunye nokuqokelela ndawonye ngokulandelelana konke
iziganeko kunye nobomi kunye neefom ezifakwe kwiimithombo zendalo kunye nezilwanyana zemifuno kunye nezilwanyana ezazisasazwa emva kokufa, kwaye zidibanisa kwaye zakhiwe emzimbeni omtsha womntu, indawo entsha, ngokutsho komphefumlo, uhlobo lomzimba kuba, kwaye uyilungiselela ukuba ibe yindawo yokuhlala yenyama ukuze kubuyiselwe kunye nokubuyiselwa kwakhona kwenxalenye yomenzi we-Self Triune. Ukufuduka kwamalungu omzimba kummandla okanye ngezi zikumkani
yendalo: i-mineral or elemental, isityalo okanye imifuno, kunye nesilwanyana, ibe ngumntwana. Oko kukuphela kokutshintshwa komphefumlo, ifom, kumntu, ngaphaya okanye kubukumkani obuthathu bendalo ukuya kumntu.
Self Triune: Ukungazi kakuhle nokungafi; Ubuni kunye nolwazi njengengomazi; ukufaneleka kwayo kwaye uqikelele inxaxheba njengengcamango, kwiNaphakade; kwaye, umnqweno kunye nokuziva njengenxalenye yomenzi, okhoyo ngexesha elikhoyo emhlabeni.
Ukuzimela kweThathu kweeNhlaba, I: lufana nolwazi lwehlabathi le-noetic ye-Triune Selves, kwaye limi ngokubhekiselele kwi-Supreme Intelligence njengokuba i-Triune Self ibe yiNgqondo.
Ithemba: iyinkolelo ebalulekileyo ekunyanisekeni nasekunyanisekeleni kwabanye abantu, kuba kukho inzulu ehleli ekholweni. Xa umntu edidekile ngenxa yokuthembela kwakhe kokunye, kufuneka
aphelelwe yithemba kuye, kodwa kufuneka afunde ukunyamekela, ukunyamekela oko kwaye uthembela kuye.
Inyani:unomnqweno wokucinga nokuthetha ngokuthe ngqo ngezinto ngaphandle kokufuna ukukhohlisa okanye ukuthetha kakubi umxholo ocingwayo okanye uthethe ngawo. Ngokuqinisekileyo, kuyaqondakala ukuba umntu akafanele angabonakali
abantu abanomdla okanye abanomdla konke awaziyo.
Iintlobo: Uhlobo luqala okanye iqalo lefomu, kwaye ifom kukubandakanywa nokuzaliswa kohlobo. Iingcamango zintlobo zezilwanyana kunye nezinto kwaye ziyiimo ezibonakalayo njengezibonakalisa iimvakalelo zabantu kunye neminqweno kwisikrini sendalo.
Ukuqonda: ukuqonda kunye nokuziva ukuba zeziphi izinto, ukuba ziphi ubudlelwane babo, nokuqonda isizathu sokuba kunjalo kwaye zihlobene.
Iyunithi, A: yinto engabonakaliyo kunye nengenakulinganiswa, isangqa, esinomgca ongenakubonakaliswa, njengoko kuboniswe ngophahla olungaphezulu. Icala elibonakalisiweyo linomsebenzi osebenzayo kunye noluhlu, njengoko kuboniswe ngumgca ophakathi. Iinguqu ezenziwe ngokusebenzisana kwazo zenziwa ngethuba lokungabonakaliswa kuzo zombini. Yonke inyunithi inokuthi ibe yinto enobungqina-Ubumnandi-ngokuqhubeka kwayo ngokuqhubekayo ekuqapheliseni ngonaphakade
Units: Uqeqesho kunye nemfundo yeeyunithi kusekelwe kwisiphakamiso sokuba yonke inyunithi yendalo inokukwazi ukuba yiNkcazelo. Imfundo yeyunithi iqhutyelwa kwiYunivesithi yeMithetho. IYunivesithi yeMithetho ngu
Umzimba opheleleyo, ongenasondo ongenazicatshulwa zoMmandla woBugxininiso, olawulwa ngumenzi kunye nomcangcizi nomwazi woBuqu-zintathu boBugqibeleleyo ngokugqibeleleyo ngokomyalelo wokuNaphakade woPhuculo.
Imfundo yeyunithi engacacileyo yendalo ibandakanya ukwanda kwezinto eziqaphelisayo njengomsebenzi wayo kuzo zonke iidridi de ekugqibeleni zigqitywe kwiYunivesithi, zibe yunithi ehlakaniphile ngaphaya kwemvelo.
Iidyuli emzimbeni ofezekileyo zi: iiyunithi ezidlulileyo, iiyunithi zomqambi, kunye neeyunithi zengqondo, kwaye ekugqibeleni kukho yunithi yomoya-moya, ekuqeqesheni ukuba uphumelele kwimvelo kwaye ube yiyunithi enobuqili as ngokwazo kwaye of zonke
izinto kunye nemithetho. Iinqununu ezithatha ixesha elifutshane zihlanganiswe ngabaqambi abasebenza kunye njengokwakhiwa kuzo zonke iindawo zomthetho weYunivesithi. Ngethuba lokuhlala kwexesha elidlulileyo baxhotyiswa kwaye bahlawuliswa njengemithetho baze bathunyelwe ukuba yimithetho yokusebenza yendalo. Iinqununu zengqondo ziyi-ambassadors ezivela kwimimandla emikhulu yomlilo, umoya, amanzi kunye nomhlaba, eziza kubakhokela ezine iindlela zokuvelisa, ukuphefumla, ukujikeleza kunye nokutya-apho iilungu
zi sebenza. Iyunithi yefom-fom idibanisa iinjongo kunye neenkqubo kunye nezitho kumgaqo-siseko womsebenzi womzimba.
Units, Uhlobo: ziyaziwa ngokuqonda as yabo imisebenzi kuphela. Iimpawu zendalo aziqondi of nantoni na. Kukho iintlobo ezine: iiyunithi zamahhala ezingabonakaliyo kwaye zingabandakanyekanga kwamanye amayunithi ngobuninzi okanye kwisakhiwo; iiyunithi ezidlulileyo, ezidibeneyo okanye ezidibeneyo kwisakhiwo okanye ubunzima kwithuba kwaye zidlule; iiyunithi zomqambi, eziza kubamba kwaye zibambe iiyunithi ezithatha ixesha elide; kunye neeyunithi zengqondo, njengokubona, ukuva, ukunambitha, kunye nokuvumba, okulawula okanye ukulawula iinkqubo ezine zomzimba womntu. Zonke iiyunithi zendalo zingenangqiqo.
Iyunithi, iQumrhu: Iyunithi yelununu ye-cell iqumrhu lombutho ligcina lihambelana nazo zonke iiseli apho iqumrhu lidibeneyo, ukuze likwazi ukwenza umsebenzi walo okanye imisebenzi edibanisa nezinye izitho ukuya kwelinye leendlela ezine emzimbeni apho yiyo.
Units, Sense: ziimpawu ezine ezidibeneyo zomzimba emzimbeni odibanisa kwaye udibanise iingcinga ezine zokubona, ukuva, ukunambitha, kunye nenkohlakalo, kunye neendlela zazo ezine: ukubona kunye nokuvelisa, ukuva ngokuphefumula, ukunambitha kunye nokujikeleza yokutya; kwaye, ngezinto ezine: umlilo, umoya, amanzi kunye nomhlaba.
Amampunge: Ukungabonakali nokungabonakali kokungabikho kwemisebenzi yazo zonke izinto okanye izikhundla kunye neeseshoni ezifunwayo kwihlabathi, xa kuthelekiswa neNdlela yokuPhelela; akuqondi ukungaxhamli kokuzama
ukunandipha ukuthandwa, kunye nokuvuya kunye nokubonakala kweemeko, xa u-evansenceli uthelekiswa namandla okuthanda ukunyaniseka nokunyaniseka.
Iimpawu, iingubo ze: apha kuthiwa, bazingendawo kunye nezifiso ezingcolileyo zomenzi wobomi bomntu othi, emva kokufa kwakhe kubangela ukubandezeleka xa umenzi ezama ukuhlukana nabo. Iminqweno yesiseko njengengubo yeenkohlakalo iphinde ihlupheke,
kuba abanakho indlela yokuzikhupha ngaphandle komzimba womntu. Ngenxa yoko bahlala befuna umoya womntu onqwenela umnqweno kwaye ngubani othanda okanye oba lixhoba lokuxila okanye ulwaphulo-mthetho.
Intle: amandla, amandla okuthanda, kwindlela yokunyaniseka nokunyaniseka.
Ngaba, Ikhululekile: Ingaba ngumnqweno obalaseleyo, ngomzuzu, wexesha, okanye lobomi. Ilawula iimfuno zayo ezichasileyo kwaye ikwazi ukulawula iminqweno yabanye. Inqweno yimbane eyaziwayo ngaphakathi, enokuzenzela utshintsho ngokwalo okanye ezitshintsha ezinye izinto. Akukho mnqweno kumntu ukhululekile, kuba uqhotyoshelweyo okanye uzibandakanya kwizinto zengqondo xa ucinga. Umnqweno omnye unokulawula okanye ulawulwe ngomnye umnqweno, kodwa akukho mnqweno onokutshintsha omnye umnqweno okanye unyanzelekile ukuba uguqule ngokwawo. Akukho mandla ngaphandle kweyakhe onokuyitshintsha. Umnqweno unokuthi unqotshwe, utyunyuzwe, kwaye ube phantsi, kodwa awukwazi ukutshintsha ngokwawo ngaphandle kokuba ukhetha kwaye ufuna ukutshintsha. Ikhululekile ukukhetha ukuba ingaba okanye ayiyi kuguqula ngokwayo. Eli gunya lokukhetha ukuba liya kuhlala linamathele kule nto okanye loo nto, okanye ingaba iya kuvumela ukuba into leyo ibe yintlangano, inqaku layo lenkululeko, inqaku lenkululeko ukuba yonke into enomnqweno kwaye. Ingadlulisela indawo yayo kwinkululeko inqwenela ukuba, ukuba yenze, okanye ukuba nayo, ngaphandle kokuzibandakanya ngokwayo, ukuba yenze ntoni, okanye ukuba nayo. Xa uya kucinga ngaphandle kokuqhotyoshelweyo kwento ecinga ngayo, inkululeko, kwaye inenkululeko. Inkululeko, inokuyenza okanye yenza okanye ifuna ukuba yintoni okanye iyenze okanye iyenze, xa nje ihlala ingaxhomekekanga. Inkululeko yokuzikhethela kukuba ingabandakanyeki, ungabandakanyi.
Ubulumko: ukusetyenziswa okufanelekileyo kolwazi.
Umsebenzi: umsebenzi wengqondo okanye womzimba, iindlela kunye nendlela ekufezekiswe ngayo injongo.
Ihlabathi, i-Noetic: ayilona lizwe lendalo; yindawo ehlakaniphile okanye ulwazi loMmandla woBugxininiso, ubunye obunomklamo weeNkcazo zoThathu kwiSelves kunye nemithetho elawula uluntu. Lwazi olungapheliyo oluphakade malunga nawo onke ama-Selves aseThathu kunye nokubhekiselele kulo lonke ixesha elidlulileyo, elikhoyo kunye nelo liye lamiselwa elizayo kwihlabathi lehlabathi ezine. Ulwazi olusoloko oluqokelelayo nolushintshayo lwengqondo kwihlabathi lomntu ngokuzifumana nokuzama, alinakongeza kwihlabathi yolwazi. Ezi zifana neemveliso zasehlobo nasebusika, eziza kwaye zihamba. Ihlabathi lolwazi
sisisombululo solwazi lwabo bonke abathathu be-Triune, kunye nolwazi lwabo bonke lufumaneka kwi-Triune Self Self.
Aphosakeleyo: yicinga okanye isenzo esivela kulokho owaziyo njengelungelo.